Sei ndakaroorwa White Girl — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Vamwe aisazombofa funga kuroorazve mumwe akanga asiri zvakafanana urudzi sezvo pavo, saka regai ndikuudzei nei ndakazviita.
Kuva akatendeseka, Ndaigara kutarisirwa aroore mukadzi mutema. Ndakawana vakadzi vemarudzi ose akanaka, asi vasikana vatema vakanga "zvaunoda." wangu Asi pandakasvika pamusoro kukoreji wangu kembasi muna 2006, Handina kutsvaka mudzimai zvachose. Ndaingoda kukura mukutenda kwangu uye kuwana dzidzo yakanaka. album yangu yokutanga yakanga ichangobva kubuda, saka ndakava zvakawanda nezvimwe zvinhu pfungwa. Asi sezvo ndakasangana vanhu pachikoro, mumwe sophomore anonzi Jessica zvechokwadi akabatwa nezvemifananidzo uye takava shamwari.
Isu wakamhanyira mukati chete nezvedzidzo uye isu akaguma kubatana kereke chete, saka takaona mumwe zvizhinji. Uye zvakawanda ndakasvika pakuziva kwake, vakanyanya Ndakatorwa mwoyo naye. Iye vainyatsoda Jesu uye akanga ava sevana kuda kuita chero Akabvunza. tsitsi dzake nokuti vanhu vanoshayiwa akadenha ini uye iye wakange ane mwoyo unozvininipisa kuti vakabvuma Shoko. Over kuti rokutanga gore, Ini vakamutarisa zvibayiro vasingaverengeki maawa nguva yake vaishanda chechi yedu. Pamusoro zvose izvozvo, Ndaifarira nokuva rakapoteredzwa. kukurukura kwedu, kana zvakakura kana one, nguva dzose yakafukidza nyore. Saka ndakapedzisira ndakatanga kuzvibvunza, "Ndinofanira kuroorwa musikana uyu?"
Jessica haana kutarira akafanana ndaitarisira mudzimai wangu ramangwana kutarisa, asi chokwadi kuti hazvina basa kuti ini. Regai vandibate zvakaipa, Ndakafunga akanga akanaka kubvira pandakatanga kuonana naye. Uye ndakanga kumbobvira inoshora aroora musikana chena. Ini chete haana kufunga ndingade. Asi sezvo ndakakurira mukutenda kwangu uye mwoyo wangu achinja, dzangu zvaunofarira vakatanga kuchinja zvakare. chikuru zvinodiwa yangu yakanga kuti mudzimai wangu kuzvipira, uye Jessica akanga. Saka Ini wifed naye.
Usamborega kwekanguva vakaita Ndinonzwa sokuti ndakanga pakugadzirisa. Zvinoita anonzwa zvakafanana pakugadzirisa kuti tisangoti mukadzi aitya Mwari kungotaura nekuda kwake urudzi. Ndaisatomboda kukoshesa wangu zvaunofarira nekuti mukadzi pamusoro zvandiri inodiwa ari mukadzi.
Hapana hapo chakaipa kuva zvatinofarira, asi tinofanira kuchengeta navo ruoko yakazaruka. Ndinoziva vamwe vanhu kutadza kuona zvinogona naye okuzvipira nokuti hadzikwani vamwe asingashumbi zvatinofarira. Vamwe zvatinoda chaizvoizvo haana basa kuti zvikuru. Vamwe zvatinoda vangatova benzi, saka tinofanira kuzviisa pasi vose kuna Rugwaro.
Kana iwe nomumwe wako muri pakati kunetsana, ganda rifanane hazvina basa. Muviri mhando uye munzanga sezvisingakoshi. Unoda kuti kuzvipira uye kuzvininipisa. Uye sezvo ini nomudzimai wangu dzinotanga kurera mwana wedu wokutanga, Ini ndisingagoni kuva zvikuru kuonga kwake. Iye Ndicho chinhu chinoshamisa Amai uye simba umwari mwanakomana-kunyange wangu izvo zvine chokuita naye dzinza. Hapana chakaipa kuda zvinhu mumwe, asi tinofanira kuzviisa pasi zvido zvedu kuti Mwari anoda kwatiri ari mudzimai. Chii Ndaida uye vaida zvikuru aiva mudiwa okuzvipira, uye ndizvozvo chaizvo Mwari akapa.
CLL • Gumiguru 31, 2013 pa 1:50 pm • pindura
Zvakanaka akati Trip. murume wangu White uye ndiri Black uye ndaigara kuti akabvunza chii chakaita nditsaure mumwe kunze nhangemutange yangu. I nguva dzose vanopindura kuti Mwari akaita sarudzo neni uye Akaita zvinoshamisa basa kudaro, nani kupfuura kare aigona maita Ini ndoga. Mwari akanaka! Rambai muchiita zvaunoita! 116! Jesu pakutanga kusvikira tiri pasi penyika!
nezvaEricka • Mbudzi 17, 2013 pa 8:59 ndiri • pindura
Tinotenda kuti kutendeseka Trip Lee. Ndinobvumirana. Unogona kuva aanoda asi unofanira kuiita ane ruoko rakavhurika nokuti somuKristu kuzvipira kwako wokutanga kuna Kristu uye wawakaroorana naye ane kutsigira kuti. zvakaenzana yolked…
Wadsworth • Ndira 2, 2014 pa 3:52 ndiri • pindura
Great romukova Trip.
Ndine dambudziko kuona Blog yako foni yangu. Mapeji hunoita wakaiswa mukuvhiringidza kuruboshwe-kodzero scrolling uye mashoko pakupera mutsetse mumwe anoita kubviswa chidzitiro yangu saka ini dzimwe nguva handigoni kuita pfungwa zvimwe mitsara. Handina chokwadi kana iri riri dambudziko Browser wangu kana zvichida unyanzvi ari Blog wacho setup. Just aida muzoiisa chete Incase chinhu chinogona kuitwa kubva kumugumo wako.
Maria • Ndira 10, 2015 pa 8:10 pm • pindura
Mwanasikana wangu anofarira mimhanzi yako. chokwadi, Ndinofanira kubvuma; Ndinoita zvakare:). Kana iye wokutanga akatanga ini kutenderera nziyo pamwe yedu nezvimwe kufarira, lacris) Ndakanga chaizvo akafara yenyu Kuzvipira simba Via mumhanzi yako. Asi ini ndaramba zvishoma akangwarira. Achishamisika kana mumhanzi wako akaratidza unhu hwako. Kuverenga ichi Ndinovimba kuti iwe uri munhu Godly. Ndinonamata makomborero akawanda zvakawanda iwe nomudzimai wako akanaka uye -yevedza mwanakomana. pachake achitaura, uye munguva apo pane zvakawanda zvakaipa, urudzi inongova kuti. Mumwe Zvechokwadi mhanza kuva mudzimai (kana uri munhu) anoda Jesu uye anomubatira pamwe rutivi iwe.
Adam Craven • Ndira 26, 2017 pa 10:24 ndiri • pindura
AMENI!!! Handina kumbonzwisisa chaizvoizvo nei vamwe vanhu akafuratira mukadzi aitya Mwari nokungoti havana kufanira kupinda rimwe dzavo zvaunofarira. Ndine hanzvadzi akapotsa akaisa sarudzo pamberi mufaro. Iye pakupedzisira akaenda inoshamisa shoko mwari uye akanyengetera nezvazvo uye akanyengetera uye pakupedzisira kakamuka wake mhinduro uye Ini zvino 2 vana vevanun'una uye mwari mukuru anotya tsano!! Haumboiti anofanira zvaunofarira usati mwari nekuti ose nguva munhu ivo vanotofanira mate pachiso chaMwari uye yangu zvaunofarira pamberi penyu!!
Nahledge • Gumiguru 31, 2013 pa 1:52 pm • pindura
Dope romukova fam!
Michael • Gumiguru 8, 2014 pa 4:48 ndiri • pindura
Alexis • Gumiguru 31, 2013 pa 1:54 pm • pindura
Achiri nani rudo nyaya pane yorubvunzavaeni.
Daniel Troutman • Gumiguru 31, 2013 pa 2:51 pm • pindura
Tam • Gumiguru 31, 2013 pa 3:36 pm • pindura
ZUVA ALL nani rudo nyaya pane Twilight.
iye • Gumiguru 31, 2013 pa 6:23 pm • pindura
True nayo :)
Terrell • Gumiguru 31, 2013 pa 1:54 pm • pindura
Carina • Gumiguru 31, 2013 pa 1:54 pm • pindura
Sezvo Mwari anotungamirira, tinofanira kutevera. Ndinofunga Mumaonero eBhaibheri tiri tose rudzi chete, wokutanga kubva Adhamu naEvha akazobvunzwa vedzinza Noah. Zvingatora zvemakore uye mazana kumarudzi tichadzoka, asi isu tose vakatanga kubva chete panzvimbo. One rudzi, ethnicities zhinji.
Britta • Gumiguru 31, 2013 pa 1:55 pm • pindura
Ndinobvumirana zvachose! Ndisati ndakasangana murume wangu ndaigara vaisarudza yakachena nokuveurwa tsvuku misoro, asi zvino ndakasangana David. Aiva pamhazha mukomana ane goatee refu zvakakwana kwandiri kuti ruka! Akanga / ndiye zvose Mwari akanga ini akavimbisa ndingadai kuwana murume, asi kana ndakanga chete kutsvaga imwe chitarisiko ndingadai akarasikirwa zvakanaka chinhu Mwari akanga kwandiri!
David B • Gumiguru 31, 2013 pa 1:56 pm • pindura
Ndinozvifarira izvi. I pum kumirira to rinoshanda, ndiwo sei zvatinoita nyasha nezuva, bhuku iri cowritten nokuda Trip uye Jessica!
waEnani • Gumiguru 31, 2013 pa 1:57 pm • pindura
Ndinokutendai rwendo nokuda nyaya iyi zvinoshamisa. Kuva akatendeseka nemi, Ndiri tsvarakadenga kushamisika kana ndakaziva pamusoro wako mukadzi rudzi. asi, Ndinotenda kuti urongwa hwaMwari nokuda hwedu, havasi kuwirirana zvatinotarisira kana uchida. saka, nyaya ino yave vaindikurudzira kunyengetera uye kuwana vavariro yangu zvakanaka; saka kana munhu zvakarurama anoita vauya nzira yangu, Mwari-chido, Ndakagadzirira. Ndinokutendai zvakare BRO. Rudo iwe yako fam muna Jesu. Mwari komborera.
Rachel • Gumiguru 31, 2013 pa 1:57 pm • pindura
Wow. Ndinotenda nokuda kwenyu wakazaruka uye vakatendeseka mwoyo panyaya iyi, sezvo ndine chokwadi zviri zvisina kugadziriswa zvakakwana! Ini nemurume wangu tiri chete “rudzi” asi ndinogona kuona ichi gakava chete pamusoro yakapusa zvinhu zvakafanana someones munzanga (rudzii basa zvavanazvo), kana vaine vana, chii zvavo kare kwave, zvisinei wether vari Kristu kana kwete. Ndinoziva manga Chokwadi ndingadai ndakaroora murume wangu zvisinei rudzi rwake, chinzvimbo, kana kumashure. rudo rwaMwari uye nyasha runofukidza zvose uye anoita zvose zvitsva uye akanaka. Uye akaita iwe wakati, Anoziva zvatinoda kupfuura zvatinoita isu. Ndinokutendai nokuti this post!!
Paul • Gumiguru 31, 2013 pa 2:00 pm • pindura
izvi zvakanga…. sokusunungurwa.
njenjere • Gumiguru 31, 2013 pa 2:01 pm • pindura
Absolutely yakanaka. Ndinoda kuti iwe anotaurwa sei zvaunofarira zvakachinja apo zvaunokoshesa achinja. Mwari anotyisa, Ane yakanakisisa nomumwe wedu asi tinofanira kubuda nenzira kwedu kuitira kuti tinogona kuona, kugamuchira uye vanodzida. Ndiri mukadzi mutema vasingagoni basa zvishoma pamusoro rudzi. munyengetero wangu kuona vanhu vaMwari sokuonekwa uye kufamba kuda kwake. Ndizvo. Iye Muiti wedu, uyo tiri kuva musaruraganda?
nondo • Gumiguru 31, 2013 pa 2:02 pm • pindura
Blog Great kuti vanhu vanofanira kuverenga. Ndiri Lebanese Armenian uye murume wangu vatema uye takaenda kuburikidza uye vari achipfuura mameseji kubva mhuri yangu.
I kumbova sarudzo kuti urudzi. Ndakaponeswa Ndisati ndaiva 3 zvakakomba ukama zvakasiyana urudzi uye pashure ndaibatanidzwawo vakaponeswa uye akakura ukama hwangu naKristu aiva zvose pamusoro ani ndiri “akadana” kuva; uyo Mwari ane “akagadzwa” zvangu.
Akakurira hazvina kwazvo munhu aanoda asi chinodiwa nemhuri yangu kuroora mukati urudzi yangu asi handina basa; ndaigara vaiona makwai dema zvakadaro…
Kwandiri zvose zvaikosha zvakanga zvakaitwa naIshe nokuda hwangu uye kana murume wangu chakaziviswa kwandiri ndaiva runyararo neyokuti achiziva kuti ini kutsuduguka. Tichiri ndichinamatira mwoyo mhuri yangu kupfaviswa asi pakupedzisira zvose kufunga kuti ndiri muna kwaMwari uye nzira dzake uye hapana apo mumwe Ndinoda be..I ndiri ndakachengeteka mukuda kwake.
Michael • Gumiguru 31, 2013 pa 2:03 pm • pindura
Iri raiva guru mumhanyi Trip. Handina kumbonzwa kufarira kwangu urudzi, Hispanic, asi sezvo ndava akura zvikuru mukutenda kwangu yava zvakawanda pachena kwandiri kuti ganda rifanane asingatadzi nyaya zvakawanda. Izvi zvinozorodza kuverenga uye Ndinovonga Mwari kuti akapa iwe mukadzi huru yakadai kuti akubatsire kuramba uchamukudza. Thanks nokuti achifuridzirwa mashoko enyu ose!
vakavhiringika pfungwa • Gumiguru 31, 2013 pa 2:03 pm • pindura
Ini nomudzimai wangu tiri vanhu chena. Ishe akasundudzira nesu tiitwe kuti mwana wedu wokutanga. In kuti urongwa unogona kusarudza zvaunoda. Kwava zvakafanana sokunhonga panze puppy. Zvakadaro mumwe sarudzo unokwanisa kuita ndechokuti rudzi. Hatina dambudziko chero rudzi, zvisinei, kwandinobva ivo VENGAI vanhu vatema. Saka isu kusatsaurira kupfeka mwana mutema nokuda kwavo uye nzira kuti vaizopiwa kubatwa kana tikakunda akavadzoserazve kuona sekuru naambuya vangu. Handina kazhinji mutsimba chisarudzo. Ko isu kuita zvakanaka? Vakanga isu kuchengetedza mwana wedu kubva ruvengo, kana vakanga isu kutamba Mwari muupenyu hwedu? Tiri achinyatsoita chisarudzo ikozvino, nokuti pamusoro, asi unofunga?
DeeDee • Gumiguru 31, 2013 pa 6:26 pm • pindura
Ndakaverenga renyu romukova… Ndiri mutema, uye rakagamuchirwa vabereki vangu vari chena. Kunyange mutongi vanobata nyaya yakanga vatema. Baba naAmai vakanga huta nokuti taigara munzvimbo ine I uye mumwe wangu dzimwe vakagamuchirwa mungafanira asina kunge sezvo kurindwa kubva vanhu rusaruro. Kuti zviri kutaurwa, vakavimba naMwari, uye haana akamisidzana ezvinhu hanya.
Ndinofunga uye ndinotenda kuti iwe nemukadzi wako akaita zvakanga zvakanaka kuti mhuri yako. Mumwe mamiriro ezvinhu akasiyana uye anotipa Mwari ane nyasha kufamba nguva duku uye makuru muupenyu. kukurudzirwa! Ndiani anoziva, zvichida muchanzwisisa kuwana mukana kutora zvakare uye sarudza dema (kana zvimwe urudzi) mwana! Mwari aiziva yenyu ipapo, Anoziva kunyange munguva dzino.
Cece • Gumiguru 31, 2013 pa 7:51 pm • pindura
Ndinobva mumhuri umo vabereki vangu chena zvinoona 6 vana vatema. Ndinofunga kuti kutendeseka kwazvo kwamuri mose kuti zvechokwadi vanoziva kuti yekutora kunze rudzi rwako zvinoreva here kuti kuva achida chaizvo pamusoro kubvumira mwana wako zvichitambudzwa netsika dzavo, uye kuongorora nokusviba kwavo. Kudai Mwari akanga zvechokwadi akakudanai kuti utevere kurera mwana dema, ipapo rirege kuti nyore kuva kwako simba mhuri iwe kubva kuti sarudzo. zvisinei, mibvunzo vanofanira kubvunzwa, ndiyo chisarudzo vagamuchire zvakawanda pamusoro pangu, kana mwana inoda musha? Ndinogona kutsungirira ose backlash shamwari uye mhuri kuti unouya yekutora mwana kunze nhangemutange yangu? Ndiri kutarisira mwana kumutswa nenzira Hunoita kuti kurega ndivanaani kuva nhengo yemhuri yangu? Ndichasiya nzvimbo mwana wangu kuti vakwanise kurwisana kuburikidza kuzivikanwa kwavo kurarama pakati nyika? Ko vanhu akamiswa munzira kuti anofarira zvikuru kufarirwa kwangu kuva chena munhu kushandisa pamusoro zvinodiwa mwana wechokwadi? How yetsika iri kuitwa iyi muitiro?
Yekutora mwana zvinoreva Mindset wose kuchinja, uye mumuviri chokutamisira kana kwezvakatipoteredza uri Haafariri mwana wako zvinodiwa. Relationships vanofanira kuti kuvakwa nevaya vari kuuya kubva maonero kuti unogona kumbobvira zvakazara anoshandawo pamwe (kuva dema). Tiri kurarama munyika ine musaruraganda nyika, uye kuti anofanira kuitwa saka kuziva here uye mwana iwe simudza. Kana wakasarudza kuziva kuti, ipapo muri munzira dzakawanda kuzvibvisa pana pachako uye mwana iwe vagamuchire. Wokugamuchirwa haisi pamusoro penyu kusvika kununura mwana dema murombo. Zviri pamusoro pako vari kukurudzirwa kubva kunzvimbo rudo uye zvechokwadi kurarama kubva mumwoyo chevhangeri kuyanana uye kuda muvakidzani wako. Izvi hazvisi pamusoro pako, somunhu chena munhu.
Munzira dzakawanda izvi zvinongova mibvunzo mishoma unofanira kunangana. Kana usiri wakagadzirira kutsungirira ichi uye kwazvo, Saka kwete yaienderana mwana dema zvimwe aiva chisarudzo chakanaka. I Hamubvumirwi imwe nyaya pazasi unokubvumira kubvunza zvinhu izvi zvakadzama nzira ndeyokukoka nhangemutange kupinda nhaurirano uye kuwana onei adoptees vavo nazvo.
Hakusi nyaya dzose kwabudirira nyaya uye kazhinji nguva idzodzo hadzisi nyaya atinzwe. Ndine rombo rakanaka kuti zvangu zvakaitika yangu mhuri. Munzira dzakawanda, Ndakazadzwa vachipiwa zvakawanda zvinogona kuongorora ani ndinewe mikana yakawanda, zvisinei, Ndinoziva kuti anouya aine mari uye tinofanira kusiya nzvimbo kuti kuti kutaurwa anenge.
Kara • Gumiguru 31, 2013 pa 2:05 pm • pindura
HAHA! “chikuru zvinodiwa yangu yakanga kuti mudzimai wangu kuzvipira, uye Jessica akanga. Saka ini wifed naye.” Best rwokuyera Blog. Farai Mwari akutungamirirei kuna mudzimai guru. :)
John Evangel • Gumiguru 31, 2013 pa 2:08 pm • pindura
Long nguva muverengi & muteereri. First nguva commenter. Ndinoda ino.
mhuri yangu muNigeria, uye baba vangu akanditumira kurongwa rugwaro rumwe Chipiri mangwanani pa 4am achiti “Kana uchida kuroora, nechokwadi mumwe wayo kubva chete kumashure sezvo muri. At vakawanda, munyika iyoyo.”
Ehe saizvozvo, Handina kuziva zvokutaura, nekuti isu kumbobvira zvakurukurwa izvi zvisati. #netsa.
Ndinoziva kuti ndinokudai kuda mudzimai wangu, kana Ndakagadzirira, zvisinei ruvara rweganda, kwemarudzi kumashure, mutauro ematongerwo, uye zvimwe zvinoita misiyano. Chinhu chinonyanya kukosha kwandiri kuti iye ndiye chinokosha mhuri yangu – mhuri yaMwari. Zvakwana.
Tilda • Gumiguru 31, 2013 pa 6:37 pm • pindura
Hahaha. Naija vabereki vanogona kuva oma pamusoro muchato . Asi vamwe dont kutarisirwa ani nepfambi kuroorwa
QuentinLawson • Gumiguru 31, 2013 pa 2:09 pm • pindura
shamwari • Gumiguru 31, 2013 pa 2:12 pm • pindura
Thanks yokuitawo mwoyo wako Trip. Tose zvakafanana kana isu kuzokusunungura ganda. Mwari wakasika munhu mumwe nomumwe zvakaenzana uye inonanga maererano ake rinokosha design. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako.
JoshHaan • Gumiguru 31, 2013 pa 2:12 pm • pindura
Hapana chakaipa semi akati Trip pamusoro dzekuroora munhu yakasiyana rudzi. Chinokosha ndechokuti ndiani nokusingaperi iwe kana ini kuroorwa kuti vanoda Jesu (maka 12:30 BSN) uye kuti vachava vanokuda shure uye kuti isu munorida saMwari anoda Church. Mwari akuropafadzei rwendo uye mhuri yako
MichaelJ • Gumiguru 31, 2013 pa 2:13 pm • pindura
Awesome Kuparara sei nguva Ishe anochinja “maziso emwoyo edu” kuti vaenzanise pamwe “meso musoro yedu”. Ndinogona kunzwisisa zvinetso, kunyange handina kuroorwa asi, nekuti mukadzi aitya Mwari ane chido chokufadza yake Muponesi kunokosha kupfuura chero kunze chizenga. Makorokoto imi mose ndiyo makore uye Mwari anogona achikomborera vamwe.
JB • Gumiguru 31, 2013 pa 2:17 pm • pindura
I kukunzwa rwendo, zvakanaka romukova.
Virgil • Gumiguru 31, 2013 pa 2:17 pm • pindura
Ndinoshuva kuti dai aroore mukadzi mutema!
Nolan • Gumiguru 31, 2013 pa 2:18 pm • pindura
Tatenda pambiru! Zvikuru Blog renyu, akafuridzira ini kutanga yangu! Ndatenda.
OJ • Gumiguru 31, 2013 pa 2:25 pm • pindura
Nice romukova!! Ndatenda
Arthur simuchile • Gumiguru 31, 2013 pa 2:25 pm • pindura
Tose tine chete baba asi zvakasiyana vanaamai chete ropa raJesu anomhanya matiri,ganda inongova ganda,asi chii mukati medu kukosha ,wonderfull Mr Trip Lee.may Mwari akuropafadzei uye mhuri wenyu wonderfull kurudziro.
deidreBaker • Gumiguru 31, 2013 pa 2:29 pm • pindura
Wow! Handina kuziva iwe awana uye kuti iye ndiye ari vakadzi chena, revakadzi dema uye vakadzi Mwari, congrats awana rudo rwechokwadi! Ndinoda kuti iwe akatsanangura nei iwe akaroora mudzimai wako, uye iwe zvechokwadi haana kuva, asi iwe nyaya zvinoshamisa! saizvozvo iwe mukoma uye mudzimai wako akanaka Jessica, Ndinoshuva kuti vakomana vakawanda makore akawanda! Iva Blessed!
Elizabeth • Gumiguru 31, 2013 pa 2:31 pm • pindura
Waita rakaisvonaka pfungwa! Ndine kudzidza nyaya yako kuti hazvina basa pamusoro ganda rifanane asi chii ndechokuti sei munhu anofamba naMwari uye Heart wavo!! Ndinokutendai nokuti vachidya nyaya yakanaka.
Jimmy Sorrells • Gumiguru 31, 2013 pa 2:32 pm • pindura
Izvozvo zvine musoro akakwana. Chii hakuiti kuti pfungwa rusaruraganda. Sezvo pane chete rudzi chete, kuti musaruraganda ndiko kuva pamusoro rwevanhu. Kune akasiyana vanhu mapoka asi rudzi chete asi ichi sokuti kuva kurasikirwa nharo nevanhu ini akakurukura nayo kunyange zvazvo ayo chokwadi.
Timo • Gumiguru 31, 2013 pa 2:33 pm • pindura
Great romukova, rwendo!
JeffreyCravens • Gumiguru 31, 2013 pa 2:34 pm • pindura
“Ndaisatomboda kukoshesa zvaunofarira wangu mudzimai pamusoro zvandaishayiwa ari mudzimai.”
Akadaro wechokwadi uye yakadzama statement. baba vangu rasviba, mai iri chena, ivo vave vakaroorana 35 makore. Uye vamwe ine makore zvakare asi pakati mukurwisana ivavo, “ganda rifanane” zvamazvirokwazvo havana basa. Ishe ave nenyasha uye vakatendeka.
rwendo, this post Zvinozorodza BRO. Ndiri vhiki kure vachipemberera gore rangu rokutanga kuroorwa mudzimai nokuzvipira uyo anoramba ini zuva naye tsitsi. Iye zvangoitikawo kuti chiLatin, French uye Hawaiian vakadzikama. Saka kuverenga izvi rave kukosheswa zvikuru.
Thanks zvakare, Jeff.
Walter • Gumiguru 31, 2013 pa 2:34 pm • pindura
Ndinonzwa chete Funga kunze bhokisi ndiri mutema handidi kuroora mudzinza rangu kana ndine zvikonzero zvangu ndinofarira mamwe marudzi vakadzi
Michelle • Gumiguru 31, 2013 pa 2:35 pm • pindura
Ndinokutendai kugoverana uye kujekesa ichi. kana chena, nhema, nezvimwewo unofanira yaibata zvinonyatsokosha. Mweya rusaruraganda haana wakatidzivisa kwenguva refu nguva yakawanda munzvimbo. Ndinotenda tiri anoputsa zvakadaro. Mwari vakukomborere & mhuri yako kukura.
ChevyThompson • Gumiguru 31, 2013 pa 2:36 pm • pindura
zvakafanana nyaya yangu. Ndatenda 4 Posting
Bachizzle • Gumiguru 31, 2013 pa 2:37 pm • pindura
Ndine pfungwa, Ndiri america ( muIndiya) I kuzviona sei uine uye kuita rwendo. Ndakadzidza pane Southern Shemu. uye vanhu vanondibvunza kana uri kuenda kuroorwa? Ndinomupindura pamwe “kana nguva zvakanaka uye ndiri zvakanaka”. Ndinoita chengeta asvinudzwa meso angu ndinoti “Ndinoda mudzimai vanotya Mwari vachava saka rudo naJesu kuti iye uchaita kukudza shoko rake”. Uye nhangemutange nyaya anoita auya asi ndinoti zvakaoma kuwana mukadzi anokudza Jesu Shoko ndiani america akafanana neni nokuda nemagariro zvinoumba uye zvinogona pentacostalism uye matriarchial wemuTesitamende america mutsika. Thanks mashoko ako
Krih • Gumiguru 31, 2013 pa 2:37 pm • pindura
Ndainakidzwa kuverenga this post Trip. Ndiri kukuchidzira guru vako, asi Ndinofarira chokwadi kuti muri rakazaruka pamusoro nyaya nhangemutange. chokwadi, nhangemutange haafaniri basa kana totaura ani isu kuroora. Chinhu bedzi vanofanira basa iri kana vari muKristu, uye kana vari dzichienderana kwaMwari nokuda hwako. Kunze zvinokosha, rudzi kana ruvara rweganda inongova mutsauko sei tikatarisa. I wafambidzana kunze nhangemutange yangu. Ini ndiri mutema uye Aimbova wangu Korean / White. Chaisambova nyaya kwatiri, asi ndinoyeuka nguva apo isu tinowana rakanga rakatarira vamwe. Zvakanga inonakidza ruzivo, asi hapana negativity (wakange asiri zvikuru) kuti ini ndirege kudanana nomumwe munhu kunze urudzi yangu kana kuroorana navo. Izvozvo kumbobvira nyaya neni, mhuri yangu kana shamwari. Pfungwa yacho iri, isu tose tine zvatinoda, asi tinofanira kufunga kuti Mwari anoda kutanga upenyu hwedu. Nice kuona kuti nhaurirano iri zvakanaka.
Paul • Gumiguru 31, 2013 pa 2:40 pm • pindura
Pane private nzira yatingatevera kukurukura nyaya iyi, akafanana neni uye nepfambi.
Twinkle • Gumiguru 31, 2013 pa 2:46 pm • pindura
Ndinotenda Mwari kuti iwe akanyora nyaya vakadzi vechiKristu chete nokuti, Ndinonzwisisa kuti zvinokosha kuva zvizere wakazaruka zvinotaura Mwari, kusanganisira ani achibvumira kuti vauye hwako uye kunyange anotora vabvemo. Ndinoonga nokuda okuti iwe wakaita “tinofanira kuzviisa pasi zvido zvedu kuti chii Mwari anoda kwatiri ari mumwe”. Izvi mukati pacharo kunondibatsira kuvhara kure mafungiro angu uye achiziva kuti kuisa pfungwa pane Mwari anoda kuti ini uye upenyu hwangu. Ndine dema uye preferenced varume vatema; Zvisinei Mwari ari kushanda mwoyo wangu kuti nzvimbo sezvo ini kutanga kutsvaka naye maererano kuti murume nokuzvipira. Funga kuti vanhu vakawanda chaizvo kusarudza zvakaipa munhu kuroorwa kana kunyange kurasikirwa ndiani Mwari ane kwavari nokungoti dzavo pamusoro kurambidzwa / zvaunofarira. nyaya Great! It andikomborera zvechokwadi uye ndine chokwadi nevamwe vakawanda kudaro.
skateboard • Gumiguru 31, 2013 pa 2:48 pm • pindura
Vanobva South uye biracial, Ndava nayo kusawirirana nezvokudanana vendudzi zvizhinji. Ndinogona kuenda kuva mwana waMwari akanaka nevamwe funga chikanganiso kana kutuka izwi. Preciate iwe kutaura izvi! Tariro murume wangu sezvo pakubvuma ini iwe nemukadzi wako zvakanga mumwe! 116!
JO NA T • Gumiguru 31, 2013 pa 2:50 pm • pindura
Good romukova Ndinofunga kuti yakawanda nguva hazvisi hazvo kuti isu vanosarudza mumwe ruvara kana dzinza, ndizvo zvaunofanira anoshandiswa. By iwe uri muKristu uye kubvumira Mwari kuti azarure meso ako iwe wakawana wako chinhu chakanaka. Congrats BRO.
komborera • Gumiguru 31, 2013 pa 2:51 pm • pindura
Ricky • Gumiguru 31, 2013 pa 2:52 pm • pindura
Great romukova Trip! Hapana nzvimbo iri muvhangeri kuti rusaruraganda.
Daniel Troutman • Gumiguru 31, 2013 pa 2:53 pm • pindura
Ndinofunga kuti kutonhora uye zvakangwara venyu kunyora this post. Zvinobatsira vanhu kuti rudo haazivi Mapato duku akafanana dzinza kana rudzi. 1 Corinthians 13 haritauri chinhu pamusoro rudzi; Rinotaura pamusoro murefu, kuzvininipisa, uye uchenjeri. Big zvinombooma guru romukova!
chido • Gumiguru 31, 2013 pa 2:53 pm • pindura
Right pane! Ichi chikomborero. Ndanga akabvunza, aona zviso mwoyo, uye ndakanzwa vanhu vachitaura sei / sei I akagadzirisa kana akava “arohwe”. Ndakanyengetera kuti mukadzi aitya Mwari uye iye wakandituma wake. Ndinoda mudzimai wangu inenge chena (Ndiri mutema). iye & vana vedu vari chikomborero changu chikuru kuna Mwari uye ndingadai kuzvida neimwe nzira. Ndinokutendai yakazaruka kutendeseka kwako. Rudo anoita runokurira zvose.
Kudada ne 116!
Major • Gumiguru 31, 2013 pa 3:02 pm • pindura
Great nyaya Trip uye congrats. Ini dai iwe ungadai wakaita yakajeka kuti pakusarudza mudzimai aiva nechokuita chinhu nokuva chakakanganisika kana zvisipo mukadzi dema. Nyaya inosiya chinhu pamusoro iyoyo. wo, zvinofanira pachena kuti zvichida dzaunosarudza kereke uye chikoro akaisa Unokwanisa kuva vakadzi kumativi vashoma vatema. vatema Vazhinji vanogara sezvo vashoma mune zvose okukurukura kwenzanga uye izvi zvine zvazvinoita rudzi michato chete. I pachangu vachida kuona vakadzi rikasviba nevarume vatema yepamusoro, asi handigoni kupikisana chii zvabatanidzwa naMwari. Nerombo kuti iwe nemhuri yako b
David • Gumiguru 31, 2013 pa 3:06 pm • pindura
Excellent Blog. Ndava kuti kushandisa izwi “WiFi” ikozvino. noruremekedzo, ehe saizvozvo.
Sean • Gumiguru 31, 2013 pa 3:07 pm • pindura
mudzimai wangu & I tiri chena… tine 3 chena vana uye 1 mwanakomana African (Ithiyopiya). Tinowana zvimwe mibvunzo chete uye shamisa rakanga rakatarira, asi tinoziva vakagadzwa naMwari kuva mhuri!
Ndinoonga kuvimbika kwako uye kubudirana pachena kuna kwaMwari hwako… izvo Ndinofunga ndiyo pfungwa huru nyaya yako – Kutsvaka kwaMwari pane kwedu zvatinofarira!
Pfungwa iyi zvebhaibheri zvinogona “vaikopera & pasted” mumwe chokuita rimwe vatendi upenyu… uye tinofanira!
JHolla • Gumiguru 31, 2013 pa 3:10 pm • pindura
I uchira iwe kuti chido chako kugoverana yenyu “zvikonzero” nokuti pokuroora kunze nhangemutange. My yokutanga kufunga, somunhu akaroora mukadzi Asian, akanga nei kudiwa kupembedza ichi munhu. Ehe saizvozvo, zvangu uye mudzimai wangu’ ganda rifanane rakafanana, siyana edu uye kurerwa muri kure vamwe nomumwe, munhu aigona kutaura “sei kumuroora?”Sezvamambotaura, mudzimai wako, ndiyo THE mukadzi, THE mubatsiri, vamwe (kana mudzimai wangu kuverenga, “KUVANDUDZWA”) hafu kuti Akatipa. Mwari anounza vaya hwedu kuti tinofanira kuva, kuti isu kupikisa kuti tive nani. Saka chii kana mumwe munhu sokuti vakasiyana kwandiri kunze. Sewe, tinofanira tose achitsvaka vaya vane Mwari kutsvaka mwoyo ndechokuti yakaisvonaka chizenga anogona kuzviwanira.
kuva • Gumiguru 31, 2013 pa 3:18 pm • pindura
Great romukova. Kuva akatendeseka ndinotenda kuti mamwe vaKristu dzakawanda vakadzi vechiKristu zvikurukuru kuroorwa (pachangu zvaisanganisira) hwaizochengetedzwa akaroora kana aigona kunge akaroora nokukurumidza kana isu ndikabvisa dzimwe pfungwa dzedu kudzika. Just ichangopfuura ndava kunyengetera Mwari ndinoda Ur yakanakisisa. Tinofanira kuvimba naBaba vedu Vekudenga kuti anoziva zvatinoda. My chikuru chinhu Ndinoda murume anotya Mwari uye ndinoda sei nepfambi vakati kuti chinhu chikuru supersedes rudzi kunyange Mwari achatikomborera nokuchiva kwemwoyo yedu. Great romukova N Mwari ropafadzai
Nicole • Gumiguru 31, 2013 pa 3:20 pm • pindura
basa guru kwete chete dzokunyora pachako, asi muchiita kudaro nenzira vamwe vachanzwisisa. Kana isu kutanga kuchinja maonero atinoita upenyu zvavo, tichaona zvakawanda zvatinogona “tarisira” ane chokuita kuda kwaBaba. The pedyo tiri naye, zvikuru uye vakawanda vedu “tarisiro” changed nekuti vanotanga zvinozadzisa zvaanoda uye kwete zvedu. Mwari Ropafadzai iwe nemhuri yako. Rambai muchiita zvauri kuita munin'ina wangu muna Kristu. Nhema, chena kana pepuru, ruvara hahushandi kana totaura muviri waKristu muchisungo. I vakakomborerwa chaizvo munhu waMwari, inenge urudzi yangu chete, asi kupfuura chero munhu pashure raMwari nomwoyo inova zvose kuti chinokosha mubhuku rangu.
Andrea • Gumiguru 31, 2013 pa 3:22 pm • pindura
Thanks Trip! Ichokwadi akava neni kufunga kwangu pezvatinoda uye sei dzimwe nguva ndakazvichengeta ane maoko urefu kubva mamwe gents zvakanaka chete Kosi handina kuvaona kwezva. Points nyaya kudada. Asi zvikuru mashoko anotsigira vendudzi ukama. Dai mhuri yangu vakagoverana maonero aya. Kana ini kuroorwa munhu mutema, hazvisi nyore.
Jason • Gumiguru 31, 2013 pa 3:38 pm • pindura
Ndinofunga kuti zvikuru kuti iwe akatarira kare ganda ruvara uye urudzi. Ini handigoni kumira kana vanhu kuomerera kuti uye vanoda kugara mukati rudzi yavo chero chikonzero. Tiri vanhu vane zvakasiyana noruvara ganda zvose kukanganiswa nechivi. musikana wangu Spanish uye ndine nhema asi handina kumbobvira kutarisa kwaari uye ona mukadzi Spanish, I kutarisa kwaari uye kuona mukadzi, zvisinei ganda ruvara kana urudzi.
MrsHendrix • Gumiguru 31, 2013 pa 3:48 pm • pindura
Amen. Ndiri akakomborerwa kwako Achipindura. Kamwe tine ukama naKristu, zvaanoda anova kuda kwedu uye kuda kwake chaiva kuti mudzimai mudzimai wako elnaz…. (kana kuti kunyange zvine musoro). Iye akagadzira naye kunyanya kwamuri mutevedzeri angadaro. Zvichida iye anobata yakawanda flack kuti pokuroorana “nhema” dude, asi Ishe vaiziva chaizvo zviri kwamuri inodiwa. Tsvakai Him wokutanga uye zvose zvichawedzerwa kwamuri (kusanganisira kodzero murume).
Garai mukoma Blessed uye kuramba kuva chikomborero kune vamwe uyewo.
naLeilani Bailey • Gumiguru 31, 2013 pa 3:48 pm • pindura
Mwari Bless wenyu Union Trip.
Ndinokutendai kuudzawo kwako kworuzivo.
Gods Marriage sungano hahuzi ruvara kana rudzi. Rudo rwake kusingaperi kwazvo zvose..
Stacy • Gumiguru 31, 2013 pa 4:05 pm • pindura
Saka farai iwe Hamubvumirwi ichi. Sezvo zvinobikwa bi-kwemarudzi muchato uye mukadzi mumwe munhu asingadi kuratidza kana vavo :) nyaya iyi chaizvo kwandiri. Mwari akandikomborera kwazvo nemurume wangu, uye marwadziro ini kufunga kune avo kubva ikoko vaizoramba chii naMwari nokuda kwavo pakusaziva / rusaruraganda.
Favorite mutsetse: “Saka ini wifed naye.” LOL!
Natalie • Gumiguru 31, 2013 pa 4:30 pm • pindura
Chokwadi nyaya huru, uye Im farai kuti pane vanhu ikoko vakaita imi kuzarurira kukurukura nyaya seizvi uye kuva zvechokwadi nazvo, nekuti ipapo nguva dzose sokuti kuva kusemwa kuti vendudzi ukama.
Ndine Chinese uye murume wangu rasviba, uye kurwisa ratiri vasangana pamwe rwendo rwedu pamwe kunge vakaoma uye bvunzo chaiyo. Takaroorana muduku semi wako mudzimai, ndanga 21 uye akanga 24. Tine 2 vanasikana chete, uye kana Im panze oga navo, Ndinenge kuti akamira mumugwagwa uye vatorwa vaizova vakaita “ndiye baba vatema?”
Vazhinji vose hondo ave mhuri yangu, nekuti havana kumbofunga ndingada kuti kuroorwa munhu mutema. Takaita diki muchato uye pamusoro hafu mhuri yangu vakaramba kuuya. Asi Mwari ndiye zvinoshamisa nokuti zvose izvi, Kutenda Amai vangu akanga dzikaedzwa, mindsets mukati mhuri yangu yakanga rakachinjwa. murume wangu unogamuchirwa zvino, uye Amai vangu Umutende sezvo mwanakomana wake mutemo ikozvino (ndiro rakakura cheefa kwatiri!) Pane vachiri vamwe nzira kuenda, asi zvakadaro zvakawanda mberi kuti ndichapa zvose Mwari rukudzo. Ramba wakadaro Trip, uri munhu kurudziro kune vamwe uye ndinonyengetera kuti Mwari acharamba akuropafadzei, mhuri yenyu ushumiri.
PS: Unofanira kuuya pasi kuita muLondon, UK imwe nguva!!
LoganSharp • Gumiguru 31, 2013 pa 4:38 pm • pindura
Very zvakanaka. Mudzimai wangu Hispanic, Ndiri chena. Race haana akapinda pfungwa nokuda zvikuru zvamakataura kana iwe wakasangana mudzimai wako; Ndakaona mudzimai wangu chido Mwari, wake chido kushumira vadzidzi uye tainakidzwa chaizvo zvakafanana mafirimu uye mumhanzi uye akanyengetera mumwe panguva kufambidzana. Handina kuwana sei vanhu vanofunga michato vendudzi vari “shamisa”.
Tinotenda kuti kukurukura kuti vane mafeni enyu uye kupa kurudziro.
Natasha • Gumiguru 31, 2013 pa 4:39 pm • pindura
Izvi zvakanga zvikuru! Ndinokutendai nokuti kugovana rwendo. Mwari rudo haana chaiyo aanoda asi ruponeso. Nyaya Youre raiva chikomborero.
LeonMartinez • Gumiguru 31, 2013 pa 4:41 pm • pindura
uchapupu Beautiful! Nomwoyo ichi akataura neni uye kumbova kwemarudzi aanoda kana zvakadaro kunyange ndava, Zvichiri akurudzirwa kwandiri kuti Mwari achapa zvatinoda, hazvo kuda. Uri kurudziro wechokwadi uye uchapupu mupenyu wesimba raMwari kuchinja upenyu. Mwari Ropafadzai iwe wakanaka shoma fam!
Reewantae • Gumiguru 31, 2013 pa 5:01 pm • pindura
nyaya Wonderful, rwendo! First nguva commenter pano!
Imi muri saka papfungwa kana iwe ukati, “Ndaisatomboda kukoshesa zvaunofarira wangu mudzimai pamusoro zvandaishayiwa ari mudzimai.” dzimwe nguva, Ndinonzwa kufuratirwa sezvo munhukadzi nekuti unhu hwangu uye nevakwegura, unhu muri mumwe nzira. Ndiri chii unogona kudana “shamisa” kana “siyana” maererano vanhu vazhinji Ndinoziva. Vamwe varume vakaita musikana ndiani zvishoma kupinda zvikuru fashoni kana mumwe munhu ane zvishoma munzanga uye takasununguka kundipfuura. Dzimwe nguva, Ndinofunga kuti pamwe ndiri kuita pachangu zvishoma zvinowanikwa nezvishoma kusarudza pfungwa yangu. nzira idzodzo hadzina kwakavakirwa rudzi, asi zvikuru munhu makuriro kana ravo kwadzinoita chokufambisa… nekuti ini kuchovha bhazi kuenda kuchikoro, uye handirevi chaizvo kana mukomana akaedza noushamwari neni zvavose. (Pfungwa ndechokuti kana somunhu akatasva bhazi kana chitima, haugoni mari kuti motokari uye kutyaira mumwe, Une mari shoma kana vari kupedza pamusoro zvakaipa, Naizvozvo uye hapana bhizimisi kuedza kutaura zvinozipa neni. LOL… asi ichi ndicho chakaipa zvakare.) Ndiri ndichinyengetera kuti Jehovha andibatsire kugara kuda kwake pamusoro hwangu, kuti kana nguva yasvika yokuti vamwe munhu kuti awane “zvakanaka,” Ndichange kugadzirira. :)
Mwari komborera, BRO.
Chikumi • Gumiguru 31, 2013 pa 5:25 pm • pindura
Ndinobvumirana zvachose kuti rudzi kunofanira mumwe wevaya yakazaruka muruoko zvaunofarira, asi Handibvumirani kuti, kana zvimwe 'zvaunofarira’ vari maturo paunoitirwa kunetsana. Zvinosuruvarisa, mune ruzivo rwangu, chii Ndakanzwa aiva rakashama ruoko sarudzo, uye mapfumo payo nyasha hwaMwari murume pamberi pangu,akava chakakomba tsime kukanganisa imba yangu, Papera makore akawanda, kana murume wangu vakawana alot kurema, pamusoro zvandakanga kare vaiona aiva ndakafuta puranga. Ndakanga ndagara mwoyo zvikuru mitambo mhando, saka kana ndakanga nemamiriro kunyanya kufuta, ndinobvuma, Ndakanga zvepabonde akashandura kure. Izvi zvakatungamirira kunetsana, uye kunetsana akaita sarudzo yangu yava gomo. Panzvimbo pokuva nyore chaiko zvatinofarira ndakaisa parutivi muchifarira vakakura mufananidzo zvinoshamisa munhu waMwari ndiye, Hondo isu vakanga pamusoro pangu vasiri nechido nezvebonde, kwakamutsa manzwiro kuti ini 'ndokupera’ chinhu chakanga tangibly kukosha uye zvakakodzera, uye ikozvino aifanira kuva kuva dutiful uye rudo pabonde nomumwe munhu ndaisakwanisa kupindura panyama. Chete nyasha dzaMwari akatisvitsa kuburikidza nokudaro kure, asi, chokwadi, muviri wake achiri chikuru chijana kure, uye ndichiri dai ndakanga aiturikwa kuti sarudzo yangu akandomirira munhu kukodzera mumuviri wangu mhando, uyewo vanofanira wangu murume Godly
Maddy • Gumiguru 31, 2013 pa 5:26 pm • pindura
uye, asi ndaida kukuroora. Zvakanaka anokuda. Zvakaipa pamusoro pangu..
SheilaTurner • Gumiguru 31, 2013 pa 5:28 pm • pindura
Somunhu multi-dzakamhanya-mhanya munhu, Ndakarera vana vangu kutarira chimiro munhu pakusarudza mukomana / musikana wako uye zvishoma pamusoro ruvara rweganda. Nemhaka kuti wafambidzana vanhu vanobva kumarudzi ose uye vakambonzwa dzakawanda. mashoko angu agara chero bedzi kuvabata noruremekedzo uye kuvada, ndiri ini kukutaurira kuti haukwanisi kuva kuti munhu kwakavakirwa ganda ruvara.
Ndine kutaura kuti rangu kufarira chikamu Blog ichi mashoko aya pano chaipo, “Ndaisatomboda kukoshesa zvaunofarira wangu mudzimai pamusoro zvandaishayiwa ari mudzimai.”
Kuti zvakarurama pane anogumisa!!!!
Eric • Gumiguru 31, 2013 pa 5:42 pm • pindura
Nhau dzakanaka! Iye kunyangwe “chena”! Uye imi muri kunyange “nhema” rwendo. mashoko aya mubhedha. Rumbidzai Mwari tiri tose chimwe rudzi chaAdhamu. Kunyange zvazvo tiri ethnicities akasiyana, tiri kuyananiswa muna Kristu! Amen BRO. nyaya Good. One Ropa. One Mwanakomana.
Jessica • Gumiguru 31, 2013 pa 5:49 pm • pindura
Zvikuru! Thanks kunyora izvi. Uri kukurudzira yakadaro, uye ndinokurumbidzai Mwari pane vakaroorana vanoda Mwari akafanana nemi wako mudzimai kunze uko. wo, Ndine chokwadi kuti pamwe, uchikwanisa kusvika vanhu zvizhinji kupfuura iwe aizokwanisa voga. Ramba reppin Jesu.
Taurai: Sei akaroora White Girl kubudikidza Trip Lee | 9jagirl4real
Leesa • Gumiguru 31, 2013 pa 6:03 pm • pindura
Izvi zvakanga zvikuru saka kuverenga! chaizvo. Ini nayo disppointing uye rasist nemashoko. murume wangu chena uye ndine nhema. Isu vaviri vanobva kune zvachose diffrent nyika. Handina kumbofunga ndinoda kuroorwa panze nhangemutange yangu. Ini kunyange pasina akanyengetera kuti Mwari aizoita makandiona munhu mutema ane dreads elnaz. Asi Ndinovonga Mwari aiziva zvakanga zvakanakisisa ini uye akakomborerwa kwete chete chena murume asi mambo wangu panyika! Sezvo isu tanga kuroorwa I vanzwisisa zvechokwadi zvazvinoreva kuda mumiviri yepasi izvi. Kwete kutaurira biz zvedu zvose asi tave kunetseka nembereko nyaya uye ndinovonga Mwari murume wangu nokuti akaramba ini kurudzira. Tinoda mumhanzi yenyu ushumiri. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako!
kaileybrown • Gumiguru 31, 2013 pa 7:27 pm • pindura
Ndiri chena, uye murume wangu rasviba. Pandinenge nezveupenyu naye vanhu vazhinji kumirira kusvikira mashizha kutaura “Iye isnt chii Ndaifunga!!” richishandiswa kuti kundipengesa. se, vari kuti kutonga muchato wangu. Zvino ini chete shrug uye vanoti “Iye wasnt chii Ndaifunga kana, asi ndinoziva 100% kuti ndiye Mwari wakatuma kwandiri” ayo zvakanaka kuziva aproach wako. Uye chete kuziva mafeni ako vechokwadi vanoziva sei mukadzi wako.
Taylor • Gumiguru 31, 2013 pa 7:37 pm • pindura
kuti “Martin” Comment akandipa achiumburuka pasi Laughing…asi ndiri kunyatsoona ichi rose Blog!! Man anotarira Kunze uye Mwari vanotarisa pamoyo. Mudzimai wangu aiwanzoti inoti kuti A nainen mwoyo inofanira saka chakavigwa muna Mwari. munhu ane vamutsvake Kuti zvechokwadi kumuwana…
Jake • Gumiguru 31, 2013 pa 7:51 pm • pindura
Vose takabhabhatidzwa Kristu makafuka Kristu, hapana muJudha kana muGiriki, Scinthian kana mutorwa. Ichi ndicho chokwadi pachena tsvene Gidheoni, zvisinei, zhinji mutendi vachiri “unrenewed” pfungwa ndizvozvo. Sei urudzi ichiri nyaya. Ini vacharamba dzabudapo nemarwadzo okubereka kusvikira Kristu aumbwa tose.
Pamela • Gumiguru 31, 2013 pa 7:53 pm • pindura
shoko rakanaka! Idai pics mhuri. zvikomborero!
Leesa • Gumiguru 31, 2013 pa 7:54 pm • pindura
Handina kuroorwa asi yakawanda nehanzvadzi dzangu uye vakaroora kuti vanhu vanobva mumarudzi akasiyana kubva pasi rose. Zviri inotonhorera kuti mhuri zvinogona kuitwa zvakawanda zvakasiyana namatehwe mavara. Ndinofunga vanoroorana vendudzi vari tsvarakadenga nokuti zvinotiyeuchidza kuti tiri vana vake vose zvakafanana uye zvakanaka akasika. Ishe anotarisa pamwoyo uye saka tinofanira sevanhu ushamwari uye kudanana ukama.
IAMDJLADYJ • Gumiguru 31, 2013 pa 7:54 pm • pindura
Izvi akafuridzirwa uye andikomborere munzira dzakawanda. Ndinoda kuona vendudzi vakaroorana / michato! Zvagara chido changu somukadzi dema kuroora kunze nhangemutange yangu. I kutarisira zuva I kuzosangana naye wangu achiziva akanga ruoko akanhonga uye rakagadzirirwa ini! Tinofanira kusvika panzvimbo kupfuura zvimwe zvose apo isu kutendeukira kuna Mwari uye kubvuma zvose ane kwatiri. Chokwadi zvakanaka kubvunza kana kuudza Mwari kuti nepfambi kuda kana kufanana. Kuchera ichi He achitoziva. Nani asi Anoziva zvakanakisisa kwatiri. Saka tine chii chatinokumbira kana kunyengeterera kuti Rangarirai. Chii a kuda hazvisi nguva chii nepfambi vanoda! Kuvimba Mwari kuti muzivise zvawakakumbira tendera kuita He kuita!
AmandaB • Gumiguru 31, 2013 pa 8:05 pm • pindura
Ndinonzwa kufara iwe akaroora Jessica. Iye zvinoshamisa munhu ane mwoyo kunoshamisa. Iwe mbiri ane chinoshamisa rokuchinja vanhu sezvo vakaroorana vari kuda mumwe uye Jesu. Just ndokutenda zvikuru kuti vakatarisa mwoyo uye kwete ruvara kumeso.
Paula • Gumiguru 31, 2013 pa 8:23 pm • pindura
rwendo, zvose Ndinogona kutaura wakanaka, Mashoko haagoni kuratidza mufaro mukuva iwe kuudza pachena kwakadaro nei iwe akaroora mudzimai wako, Izvi zviri kuitika kubatsira avo kuona kubva mumwe maonero uye zvichida kutevera muchato mune ramangwana. zvechokwadi Mwari anoziva kuti zvakatinakira. Dai ishe mberi kuropafadza mhuri yako!
atiya • Gumiguru 31, 2013 pa 8:25 pm • pindura
runako & zvinoshamisa….
dmoney • Gumiguru 31, 2013 pa 9:00 pm • pindura
rwendo, Ndinokutendai nokuti kuparidza chokwadi kune vasina kuudzwa chokwadi uye kuti ini pachangu. kunyange ndiri mutema wokwaEfremu nguva yaifananidzira pachangu munhu werumwe rudzi. asi ini Mwari yave zvishoma nezvishoma nevanhu neni kuti kubvuma vemarudzi ose uye kuti chinhu chakakosha mwoyo wake kunoratidza kuti Kristu. Ndiko chinokosha zvikuru. Plus une wakazara nerudo uye kutsigirwa chechi musha wangu. tizere biracial vakaroorana uye vakavhengana vana. ndinoiitawo ndine shamwari dzakawanda zvokuti yakavhenganiswa kuti pane overrunning nyika elnaz. IM nezvauri amire uye akanoudza nyika zvavanofanira kunzwa :)
SP • Gumiguru 31, 2013 pa 9:09 pm • pindura
Ndainakidzwa nokuverenga this post, rwendo. It anorova pedyo nomusha. Ndiri muna vendudzi dzakasiyana. Ndakasviba (Jamaican, Native American, madzinza anogona kuenda mberi) uye murume wangu Hungary, ChiJerimani, etc.-saka iye chena. Ndaiziva ndingadai ndisina kuroorwa munhu mutema mukomana uye handina kuziva kuti chii rudzi murume wangu ramangwana raizova. Saka sezvinoita iwe, I Kukoreji haadi kudanana asi kukura somunhu Kristu-muteveri uye vawane dzidzo uye ndakasangana uye kudanana wechiduku chena munhurume chaiyo.
Patakatanga kudanana, mwedzi mishomanana taiziva kuti kuzoroorwa zvimwe zuva uye isu vakaita chaizvo kuti gare gare makore mashoma. Ini ndaiva neropafadzo zvakakwana kukura mune siyana nzvimbo uye vomumhuri vari vendudzi ukama saka, ganda rake ruvara kutongondipa phased. Ndikamuona nokuti ndiani akanga; murume aitya Mwari ane mwoyo wakanga uzere norudo, kuzvininipisa uye mutsa. Akatarisa apfuura ganda rangu ruvara uyewo, kutarisa mwoyo wangu kuona ini sezvandiri nechomukati. Hapana mubvunzo kuti Mwari akatibudisa pamwe. Handaikwanisa ruoko-vakanonga murume ari nani nokuti ini musi pamamiriro zuva. Ehe, Ini kunge aiva zvaunofarira angu zvakare kuti chii ndaida murume wangu kuti, asi chokwadi chiri, zvechokwadi Mwari akaita ndipei zvikuru kupfuura ini zvaikodzera uye zvakawanda kuti Handina kumbokuzivai I vaitoda.
Pane nguva apo ari vendudzi nemudzimai sokuti vachinyara mune mamwe mamiriro ezvinhu asi nguva yokupedzisira I zvazvakaipira-tose ropa chete ruvara.
Jeffrey • Gumiguru 31, 2013 pa 9:34 pm • pindura
“Hapana hapo chakaipa kuva zvatinofarira, asi tine kuchengetedza kuzovarwisa ruoko rakashama.” Mazwi Guru ose tsinga muupenyu!
MarcosJackson • Gumiguru 31, 2013 pa 9:46 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti vaiswe ichi! I kunakidzwa kutendeseka uye pachena. Mwari varopafadze vaviri iwe!
Melodye • Gumiguru 31, 2013 pa 9:57 pm • pindura
Ndinotenda kuti vanhu vanoda kuteerera Mwari kupfuura vanhu vose muupenyu uye kubvumira pfungwa dzavo kuti vafanane kuda kwake uye nzira yake. Ndinofunga kakawanda hatina kunyange kuziva bhokisi parameters kuti isu pachigaro pachedu. mhuri yangu yakanga uto saka isu kunge colorblind vakawanda zvose kukura. Zvisinei muna South zvaunofarira uye pfungwa ushe mukuru, kazhinji… Ini kunyange aiva pedyo mukomana shamwari kukoreji vanondiudza kuti ndakanga kupfuura wakanaka, ngwara, musikana chinoshamisa Vaiita vamborarama asi chete kumbofunga vaizoenda kudanana munhu ___( pinza rudzi pano)___ musikana. Zvaindidya mwoyo. hah uye handina kunyange kufanana naye kuti nzira. Ndinofara iwe akabvumira pachako kuwira murudo vari chijana kuteerera kuvhura nyaya yako kusvikira vamwe.
Jason • Gumiguru 31, 2013 pa 10:43 pm • pindura
Numbers 12:1-11…No vanofanira tuzvikonzero pachako nevarume BRO, tsvaka kuzviratidza vanotenderwa kuna Ishe. A mwoyo wakachena & Kutendeka kuna Ishe Jesu achaita kudzima mutariri kana mashoko munhu anogona spek nemi.
kangstawillz • Gumiguru 31, 2013 pa 11:15 pm • pindura
rwendo Yo a ndivo man.I iyewo achaita same.lol.I kuda kuroorana muna Ishe uye ganda ruvara rudzi,e.t.c haazorambi basa chero iye ari okuzvipira one.GOD kuropafadza nepfambi murume.
Lindsey • Mbudzi 1, 2013 pa 12:00 ndiri • pindura
Its achikurudzira saka kuverenga izvi. Ndine chena uye murume wangu rasviba, uye tinogara kunyanya Hispanic nharaunda. Tine 2 vasikana vakanaka asi sezvo unogona kufungidzira isu kuwana alot kuti okuzvikudza. mhuri dzedu pachedu kunogona tsvarakadenga akaipa dzimwe nguva. Asi chinhu chinonyanya kukosha isu ndakadzidza ndechokuti kunyange zvazvo pane netsika (kunyanya kana totaura kumutsa vana), chinonyanya kukosha ndechokuti kuchengetedza mwoyo yedu uye zvido naJesu.
FortuneLawrence • Mbudzi 1, 2013 pa 1:20 ndiri • pindura
Ndiri akaropafadza kudaro kwako romukova Trip!
Ndine mubvunzo kunyange. Ndiri African(nhema) amai uye ndinosarudza vakomana chena kuti vatema. Izvozvo kunyanya nekuti handisi saka achinyatsoita vamwe tsika munyika yangu kumusha. Ndinofanira kutaura, Ndinoda vanhu vatema chaizvo asi akafanana ndakati, nyika yangu ane zvimwe pusa zvitendero. Ungati Ndiri chakaipa mukuita kudaro zvaanoda?
Julia • Mbudzi 1, 2013 pa 1:53 ndiri • pindura
Great Nyaya Trip. Ndinoda zvamakataura pamusoro rudzi vasiri nyaya. Ndiri chena kana kanenge kutarira kuti vanhu vakawanda. I akarerwa biracial musha…Amai vangu Italian uye Hispanic uye baba vangu dzikachena. Ndiri Pari achifambidzana anoshamisa mutema munhu asingadi anokuyerera neni haana kuva nhangemutange chete naye. Iye anondiona akanaka. Black vakadzi Ukuwo vanondiona ngozi. Ivo chete kundiona sezvo chena…kana vaiziva chokwadi chete. Hazvifaniri basa chii rudzi uri zvose ndechokuti 5he munhu nepfambi kuroora ari mutendi zvakare. Tinotenda zvakare nokuti nyaya.
Daniel • Mbudzi 1, 2013 pa 6:27 ndiri • pindura
Ndakashandisa kushandisa ndima mwoyo kuroorana mhando iyi. “Adhamu naEvha vaiva kazhinji ruvara chete / baba waSamsoni vaida kuroora mumwe kubva kuvaIsraeri / baba vaIsaka akaenda nepavanogona kuwana mukadzi pakati 'vanhu vake’ Isaka, nezvimwewo…”
kukurukurirana My nezvenyaya iyi vaiva utsinye, madodzi madodzi uye - zvikuru pachena - padzakavakirwa.
Zvino Mwari akachinja mwoyo wangu uye mukandisunga ezvinhu apo ndakanga ndisina kuita asi kuvimba naye. Akandidzidzisa chii kuvimba naye. Uye kana ndakatanga kukoshesa avo vakandikomberedza avo vanovimba naye. I pedyo vanhu vaMwari - pasinei netsika nechokumashure - uye kudanana vadzidzi vake nokuda kwenyasha, kutenda uye rudo vakaratidza.
Uye sei American ichi dzakaguma dzekuroora wakanaka, okuzvipira musikana Brazilian. Patova 10 mwedzi uye Mwari akatidzidzisa vaviri kwazvo! Patova chinonhuhwira ukama kuti raratidza ndadziverengazve: Nzira dzaMwari zvakanakisisa, kana pfungwa dzedu dziri vakaedzwa.
Tracy • Mbudzi 1, 2013 pa 8:05 ndiri • pindura
Handina nguva dzose kuti sei mwana anonzwa kuvhenganiswa. Ndinoziva ndirini ndingadai kuva zvakazara rudzi rumwe kana kuti zvimwe. Hazvina basa izvo, ChiChinese, eskimo, Indian nezvimwewo. Zviri mubvunzo handisati ndambonzwa akataura.
ELVISNIXON.com • Mbudzi 1, 2013 pa 8:17 ndiri • pindura
Hungarians vari Magyars. Magyars vari lineal zvizvarwa Attila ari Hun (saka izwi Hungary) vari kazhinji nezvavo savakuru “Mongolian mapoka” -Attila achiri chimwe chezvinhu dzakakurumbira vakomana mazita muHungary- sezvo ari neAripadhi- saka vava,kutaura zvazviri, zvechiAsia.
Saka imi zvinotonyanya siyana / yetsika kupfuura iwe wakafunga!
RyonFreeman • Mbudzi 1, 2013 pa 8:32 ndiri • pindura
BrendaF • Mbudzi 1, 2013 pa 8:37 ndiri • pindura
Izvozvo zvikuru! nhangemutange yake nokutendeseka haana kunyange tinya kusvikira ndakaona this post kwandiri. Ini ndiri mutema uye murume wangu hafu vatema uye chena (kunyange anotarira Hispanic) uye ndinogutsikana majee dzose nguva kubva kuvanhu vachiti Handifariri vanhu vatema. Oh uye ngavarege kuona vana vangu. are! Nguva dzose miviri kutora. Ndave ndakaroorwa 7 makore uye zvichiri anosetsa nanhasi. Mwari aropafadze mhuri yako murume!
TamaraC • Mbudzi 1, 2013 pa 8:41 ndiri • pindura
Amen! Ndatenda! uchapupu Your anoenda munyika yose… Vanhu vanoda kuti. Mwari vakukomborere!!
Message kubva Germany, Europe!
Keinya • Mbudzi 1, 2013 pa 8:44 ndiri • pindura
Ndinoonga this post zvikuru. Ndiri vendudzi dzakasiyana pamwe nomurume wangu uye ini vaviri vane nyaya sei vanhu vazive isu uye sokuti vanoziva isu runako zvakanaka sezvineiwo kudzidza chii watakaroorana naye sokunge kana kwandiri anoona pic kuti vana vangu (nekuti vaikwanisa nokuda tarirai yake oga kusvikira unoziva vari chikamu vatema zvino unogona kubata zvimwe zvishoma zvinhu) uye pakarepo anoona vanofanira kunge vasina munhu mutema baba uye kuti yaiva tarisiro yavo. wo, vana vangu tichitsetsenura kutaura mumwe mutauro kuitira kuti zvechokwadi Inovhiringidza vanhu kubva zita redu rokupedzisira ndiro Lawrence. Pane nyaya shure kuti zvakare nokuti zvakavhenganiswa rudzi zvakare (chete kwete vatema). zvakadaro hazvo, Ndinoda chokwadi kuti akabata izvi nokuti vamwe, zviri yakadaro guru ngaakuitirei uye kunyange kutambura sezvo kune simba kwemarudzi zvinofurira uye nedzvinyiriro munyika yedu (vezvenhau, Vadiwa vedu kunyange, shamwari, etc.). manzwiro angu mose neako nevamwe vazhinji yakati. Ndatenda!
Keinya • Mbudzi 1, 2013 pa 8:48 ndiri • pindura
Zviya, Ndinoda rwiyo “Thing Good” pamusoro mudzimai wako. It chaizvo akanaka uye anondisiya kufunga kwangu ukama pachavo. Thx mimhanzi huru zvakare! :)
Logan • Mbudzi 1, 2013 pa 9:17 ndiri • pindura
NDINODA “robhoti”!!! Ndava kuti kutamba nayo kuti haradhi.
Michael • Mbudzi 1, 2013 pa 9:37 ndiri • pindura
“Saka ini wifed naye.” Ndiri kuba kuti.
TylerDouglas • Mbudzi 1, 2013 pa 9:53 ndiri • pindura
Aaa!!!!! Ndiri Caucasian, uye kunyange ndaona ose pechiitiko ose Martin
Debbie • Mbudzi 1, 2013 pa 10:08 ndiri • pindura
Ndinofara kuti kuverenga ichi uye ona kuti vamwe manzwiro angu chete kune vakaroorana uye “rudzi”, mwari komborera!
Jason • Mbudzi 1, 2013 pa 10:35 ndiri • pindura
1 Samuel 16:7…Ishe vatongi kubudikidza mwoyo, saka sei dont isu? Tinofanira kuita chii pamberi naJehovha mureza wedu, kwete chii nyama yedu anoda / kana mitemo ino. Muchiitiko ichi, kubva pamaonero chomunhu, mureza kuti mudzimai ndiye Zvirevo chitsauko 31, kwete ganda rifanane / kwete mureza kuroorazve mukati wako yenyika “rudzi / zvemadzinza.”
tabby • Mbudzi 1, 2013 pa 11:20 ndiri • pindura
dude kuti rinotyisa!
Tony • Mbudzi 1, 2013 pa 11:31 ndiri • pindura
Ndinoonga ichi nekuti ndine African American uye mudzimai wangu Hispanic. nhangemutange yake haana chakaita kwandiri, nokuti mwoyo wake kuti Ishe. zvino tine mwana musikana. Pandinotarisa mudzimai wangu uye mwanasikana handina kuona mukadzi Hispanic, kana vakavhengana mwana. Ini chete kuona vaviri chikuru maropafadzo muupenyu hwangu (kunze Ishe Jesu). Dzimwe nguva ini kunyange kukanganwa kuti tiri vendudzi nemudzimai uye mhuri. Hazvisi chaizvo nyore nguva dzose nekuda vamwe vanhu, asi handidi nacho neimwe nzira. Dai Ishe mberi akuropafadzei uye mhuri yako!
Andrew • Mbudzi 1, 2013 pa 1:09 pm • pindura
rwendo, ndokutenda zvikuru iyi. Ndiri chena, uye kubva Cincinnati uye Kwandakakurira Ini kazhinji ndiye chete chena mbudzana pamusoro misa. Mudzimai wangu akanga akarerwa zvakasiyana zvachose. akakura kumaruwa Nebraska somunhu Mexican. Ini handigoni kunyange kutanga kutsanangura dzimwe nyaya iye aindiudza kuti yake hama dzaifanira kukura pamwe nemhaka ruvengo, pfungwa, uye sandara kubva kusaziva kwevanhu iye akakura.
Akatamira ari Nati kuva pedyo neni. Iye vakatamira ikoko ndichifunga aisazofanira kushivirira, nzwa, kana kuwana zvinhu akaenda kuburikidza achikura. Wow, vakanga isu vaviri akakatyamadza! Zvinhu vanhu aiti kwatiri kumashopu, Park, kana chete kunodya. Iwe vaizofunga takanga zvekuratidza, “Waizoita kudaro.” Zvakanga zvakaoma, Rudo rwedu vakaramba isu takasimba, Shamwari dzedu akanga dzedu musana, uye Mwari wedu vakaramba isu pamwe.
Isu zvino ndave ndakaroorwa 11 makore 4 vana yakanaka kuratidza kuti. Nesuvo ikozvino kurarama muguta mumaruwa chete duku apo akakura. The ruvengo shoma, asi anoratidzika achiripo. Chinhu isu nguva dzose kutaura / ita pose kwatinako izvi “kurwisa” isu kusimudza avo vari “uchirwisa” isu kumusoro mumunyengetero. Bhaibheri rinotaura pamusoro rudo muvengi wako sezvaunozviita, uye kunyange handirevi funga vanhu ava kuti vave vavengi vangu, pfungwa rugwaro uchiri chete.
rudo, isu chete tinoda kuratidza vose rudo. Zvisinei nhangemutange kana makuriro munhu, Mwari anovada, uye isu tiri kuva saKristu, saka isuwo tinofanira kuvada.
Takudzwa • Mbudzi 1, 2013 pa 1:58 pm • pindura
Wonderful Nyaya Trip Lee. Kana ndichiri kuroora asi sezvo ndaiva muduku ndakanga kufarira dzekuroora mukadzi chena nekuti vaviri Vanababamunini akaroorwa vakadzi chena. Pandakamuka vakaponeswa handina kuona mutsauko pakati vatema kana chena asi chero tiri kuita Kutenda chete.
Andrew almond • Mbudzi 1, 2013 pa 2:39 pm • pindura
Wonderful romukova Trip. Ndanga kutambura zvizhinji yapfuura chete kufambidzana mibvunzo yakadai sokuti ndiani I unofanira kufambidzana, uye kana, uye nei, uye sei kumirira Mwari kuburikidza zvose kuti zvinhu ichangopfuura, uye this post akanga akangwara chaizvo. Thanks chokuita.
Jenna • Mbudzi 1, 2013 pa 2:43 pm • pindura
Wonderful romukova! rwendo, une mhuri chakanaka, uye Ndinokutendai kugoverana mwoyo wako. Kunyange zvazvo murume wangu tiri vaviri chena, isu akakurira chaizvo zvakasiyana. Iye wechokwadi nyika mukomana uye rinozviti Redneck. Handina nguva dzose ndainzwa vasununguka kumativi vanhu vatema, kunyange somwana muduku. Ndakanga kumbobvira inoshora pokuroorana chena murume, asi yangu zvaunofarira vakanga zvachose dzakagadzirirwa kuvanhu vari hudyu-hop tsika. Vanhu kazhinji isu kubvunza sei isu akaguma pamwe, uye vanhu vazhinji vanoshamisika kuti awane murume wangu chena. Haasi zvandakanga akafanoona pachangu kukura, asi iye zvose rwandaida ari murume uye baba kuti vana vedu. Ishe andikomborera zvechokwadi, uye handigoni kufungidzira hwangu upenyu neimwe nzira!
Taurai: The List | Ukama Resource Kit
RG • Mbudzi 1, 2013 pa 3:31 pm • pindura
Haichaenderani mwoyo wako kana aanoda asi chii Mwari vakaronga / nharo. Zvinoshamisa sei naMwari nokutungamirira kunoratidzwa. Ndini Native American akakurira ari kuchengetedza uye murume wangu Mexican. Isu vaviri akakurira dzakasiyana inoti asi takatenda Changamire Mwari chete uyo atema apo aida kuti timushumire uye akaita urongwa kwatiri kusangana. Iye zvino tava kurarama pedyo kuchengetedza mumba mangu mamiriro. Ndakanyengetera (somuKristu mutsva ava nemakore 8) kuti Mwari aizoita ini kushandisa mukereke musha wangu uye ndaisambofunga kuzivikanwa kuti Mwari aizokura ini kuva yoMufundisi mudzimai uyu akati chechi! asi, Ndiri akaropafadzwa kuziva kuti Mwari irori simba uyo akasika nyika aigona kushandisa isu kuratidza vamwe rudo rwake rukuru uye nyasha. Kuuya pamwe divi murume wangu ave mubatsiri wake kugoverana evhangeri yangu vanhu.
Izvi kwaiva kurudziro huru kwandiri. Uye chikuru kunzwa sei Mwari anogona kushandura moyo kuita kuda kwake! Ramba kuita basa rake!
Ndinokutendai nokuti nziyo uye chokwadi Ungaisa. Mhuri yedu anonakidzwa mimhanzi yako. Kunyanya vana vangu vari kuyaruka.
halfNhalf • Mbudzi 1, 2013 pa 3:32 pm • pindura
murume wangu Mexican, uye ndine omuPhilippines. Ndinoziva 3 nendimi uye kudzidza mashomanana. shamwari yangu yepamwoyo rasviba uye murume wake, muArabhia. Zvinoshamisa kuona musanganiswa vemarudzi pane machechi uye kunyange mapoka.
We chaizvoizvo tarisai zviri mumwe unhu. Zviri akashambidzika kudzidza mitauro uye ona zvose tsika dzakanaka. In Kristu hapana muJudha, ChiGiriki, Munhurume kana munhukadzi.
Matt • Mbudzi 1, 2013 pa 4:06 pm • pindura
Mumwe wangu zvikuru nyadzisa “zvaunofarira” shure waiva mudzimai wangu kuti ave Denver Broncos feni.
Zvinofadza, Mwari akabvumira ini kukura pakunamata asati akauya stunner vangu.
Maria • Mbudzi 1, 2013 pa 4:13 pm • pindura
Ndiri chena, Ndine pamuviri, gore rokutanga pachikoro yezvokurapa ine dema Another mwana. At nepamuviri mitatu, Mwari akandituma shamwari – munhu shava Indian murume. Takanga zvose kutanga dzedu mabasa dzokurapa chikoro. Chii ndakanga ndava kuita ndava kupenga zvakakwana. Paakaudza vabereki vake pamusoro pangu vakatyisidzira yokubva rutsigiro zvose, hama dzake akaramba kutaura neni. Mushure gore nehafu takaroorana tichiri kuchikoro, pakurera mwanakomana wedu uye tichiri vanhu kuvhiringidzwa. Mwari ndiye akanaka, pane imwe zvikuru dzakaoma muupenyu hwangu, andipa shamwari, murume aitya Mwari, kundida, zvose kwandiri, ini + mwana. ReHeresi munhu chaiye. ReHeresi kuna Baba vane rudo chaizvo uye nenyasha.
Aleshia Robinson • Mbudzi 1, 2013 pa 4:48 pm • pindura
Izvi unyengeri asi kana ndichiona vendudzi nemudzimai pachena Ndinofunga chimwe kunze kana Ndinoona Black murume ane musikana non-Black. Handitombozivi kumbovhunduka kana kwayo vakutarisire asi ndinoziva kuti kuva Black murume munyika ino iri kupfuura vakawanda. Ndakashandisa kushanda kuhotera pamwe Black varume uye apo vakokwa vakandibata noruremekedzo uye vakatenda ndaigona kuita basa rangu neunyanzvi, Ivo flipped kuti chinja yangu Black co-vashandi pamberi pangu. Ndaigona kununura matauro mumba yavo asi vaenzi aisashama mukova kwavari. Ndaigona kanofanira vaeni nyore asi vakabvunzwa “Handizive. Unogona kubata ichi?” Ndaigona kumira panze zororo pasina kutambudzirei asi mapurisa akavamisa kubvunza “Uri vakomana kuita?” Vanhu kutonga uye kubata Black varume zvakasiyana uye handina afunga sei. Saka kana Ndinoona Black murume ane munhu, yangu pfungwa yokutanga “Ari kuedza kuti upenyu nyore pamusoro pachake.” Pfungwa yangu yechipiri “Anoda vana vake kuti zvinhu zvaro.” asi Hey, ani Ndiri kutonga? (Kunyange zvazvo ndinoita) Ini ingangova kuroora nyore kunze nhangemutange yangu nokuda RUDO wangu uchinzvera saka kufanana ndakati pakutanga, iyi inongova twasu unyengeri. Chero iwe akaroora zvako nokuda zvakarurama nezvikonzero.
Lynn Burgess • Mbudzi 1, 2013 pa 7:06 pm • pindura
I uchira Trip & Jessica Lee. Kusangana wekereke waJesu Kristu uye "vendudzi" muchato mukati muchechi yechokwadi ndiyo mhinduro rusaruraganda tsika dzedu. Pane rudzi rumwe chete, rudzi rwevanhu, "Munhurume nomunhukadzi akavasika ..." (Genesis 5:2munhu), uye hapana parinotikurudzira rugwaro kutaura kuroorwa avo wako chete ganda rifanane kana ziso chimiro.
Tiona • Mbudzi 1, 2013 pa 8:14 pm • pindura
Tinotenda kuti nyaya! Sezvinoita mukadzi dema kuroorwa anoda Mwari uye anoda kurarama upenyu hwangu nenzira inomufadza uye zvinoratidza rudo rwake kune vamwe, I wanyengetera nesimba nezvenyaya iyi. The chete varume mumachechi Ndakapinda handina kunyanya kunge non-dema varume. Dzimwe nguva ndinonzwa sokuti ndiri mujinga pasi totem danda, kukwikwidza pamusoro chena, Asian uye Hispanic vakadzi refu, inoyerera bvudzi uye zvinhu kuti ini haazombovi. Kunyange kutarira kuburikidza dzimwe kudanana nzvimbo dzechiKristu, Ndakacherechedza kuti hombe chikamu vanhu zvakasimba Profiles zvinoratidza ivo vanofarira akanyatsorevesa ethnicities zvose kunze African-American.
Nyaya yako Zvaikurudzira kwandiri uye patepi. Ini achavimba Mwari kupa muzvinhu zvose hwangu, kusanganisira ukama hwangu. Ndatenda!
Thanks wokuti wakatendeseka!
Ambuya • Mbudzi 1, 2013 pa 10:31 pm • pindura
zhinji, Makore mazhinji apfuura apo mwanakomana wangu mukuru waiva pamusoro 2, takananga kuburikidza chikamu dema kweguta uye akataura kuti vanhu vose vatema uye vakabvunza nei vose dema. Ndakaedza kutsanangura kuti kare vanhu vakafunga zvaiva nani kana vose chena vanhu vaigara imwe nzvimbo uye nezvose zvisvundu vanhu vaigara imwe nzvimbo. Ini akatizve kuti zvino tinoziva hazvina mutsauko chii ruvara ganda rako. Pamiromo yavacheche……akati, “Hongu, chinhu chakakosha kuti tine ganda!”
Jays_Page • Mbudzi 2, 2013 pa 12:56 ndiri • pindura
Well akati mukoma.
tendekai • Mbudzi 2, 2013 pa 3:32 ndiri • pindura
marring mukadzi aitya Mwari ari zvakanakisisa zvaungaita nokusingaperi kuita kuti mhuri inofara. zvakanaka rwendo zvaunoda mune vakadzi kunokosha zvikuru kupfuura chii iye anofanira kunge.
Taurai: Mugovera Shout-Outs: SBTS, Kucheka It Straight, & ushumiri Links | H.B. Charles Jr..
Kaila • Mbudzi 2, 2013 pa 4:19 pm • pindura
Ndinoda kuti maiva saka akazarurwa uye kutendeseka this post. Ndinonzwa sezvakaita kuita vendudzi dzakasiyana uye kudanana ndiyo nyaya vanhu vave vachida rakazaruka kukurukura nokuti muchizvarwa ose ndinonzwa sokunge vanhu anokuyerera nayo. Kubva yangu nemaonero ndinofunga kuti yakanaka kuona sei rudo hakuiti kusarura.
Asi ini ndinofunga kubudirana pachena wangu kwariri nokuti handina nguva dzose vakakurira munzvimbo umo yakanga isingori rudzi rumwe uye vabereki vangu haana vandirera kuti kusada munhu nokuda ganda ravo. asi, Ndakaita vava usimbe gore yangu mudiki kana ndakatora shamwari yangu yepamwoyo, akanga chena, kuti prom nekuti ambuya vangu yemadzibaba hakusi kwazvo vanhu chena. zvisinei, manzwiro haana kuchinja pfungwa dzangu pamusoro ani ndinofanirwa kana hakufaniri musi.
I kumbova zvinodiwa pane chii rudzi ndaizofambidzana. asi, kana mhuri yangu pavakaziva ndaiva mukomana uye akanga dema, vakashamiswa. Vakashamiswa nokuti mhuri yangu yepedyo kwave kugara munzvimbo predominately chena kuti kare 10 makore uye vakafunga kuti chaizomuita ukama hwangu.
Daniel • Mbudzi 2, 2013 pa 4:43 pm • pindura
Uku kwaiva chaizvo mumhanyi. Mudzimai wangu dema / El Salvadorean. .. uye ini ndiri murume Korean…. Zvemazvirokwazvo kumbonzwiwa mutsika Korean kuroora kunze rudzi ndoda Korean mumwe / Latina mukadzi dema. Zvaaiva vasinganzwisisike vendudzi nemudzimai tava vaitambudzwa zvikuru, asi chete chinhu chaikosha raiva Kristu uye chisungo chedu muna Kristu kubudikidza ushamwari kuti mukudanana uye ikozvino muwanano yedu.
Handina kumbogara kuposita zvinhu zvakadai asi this post haana kutaura neni uye musimbise kutsunga kwangu sei I kanzuru vamwe vari kutsvaka yokuwana mumwe ari urudzi yavo.
Kevin • Mbudzi 2, 2013 pa 8:12 pm • pindura
Ndinofunga izvi nyaya inoshamisa. Ndinoda kuti segirazi muri nekuti vazhinji vedu kuedza kuvanza zvinhu zvakafanana kuda zvaunofarira, asi ndinoda kuti iwe wakati tinofanira kuzviisa pasi pavo. Ndinonamata kuti Mwari anoramba kundiratidza zvinhu zvakadai nokuti Ndinonyatsotenda kuti achandibatsira kuchengeta mwoyo wangu uye meso pamusoro paMwari neShoko rake uye kwete chitarisiko vakadzi vakandipoteredza.
JoeyE • Mbudzi 4, 2013 pa 9:01 pm • pindura
Mudzimai wangu kumbofunga akanga kuwanikwa Yankee, Hispanic, Christian Jewish. Ndinofara akaita. :)
MJ • Mbudzi 5, 2013 pa 1:18 pm • pindura
akatisiyira! Kupfuura imi yokuitawo rudo rwenyu nyaya. Youth, kukoreji vadzidzi uye vechiduku vari kuda mienzaniso yakadaro! Ndinoziva nekuti ndanga ndine Nokufema kutaura zvepabonde, kudanana uye ukama navo kubva 2003. Achaita zvachose kuti kugoverana navo https://www.facebook.com/FMUniversity.
Mwari komborera, rwendo!
zacharybrunotte • Mbudzi 6, 2013 pa 6:19 pm • pindura
Ndiri chena murume ane mudzimai dema. Tichiri mugore redu rokutanga, asi hapana zvikunguro! Tine chibhakera mwana wedu munzira uye tichida mhuri yedu duku. Like Trip Lee, I hunomirirwa pachangu dzekuroora mukadzi vorudzi rwangu (Ndinofunga kwayo chete chaivo). Asi handina kumbobvira kamwe akabvunza kana kufunga kuti “rudyi” kana “zvakaipa.” Iye Mwari. Ndiko nhangemutange chete kuti I tarisa!!
NTOBEKO • Mbudzi 7, 2013 pa 2:01 ndiri • pindura
Amen fam, rumbidzo kuna Mwari kuti kusiyana nyasha uye rugare.
ugh • Mbudzi 7, 2013 pa 8:51 pm • pindura
You wifed naye? Ugh, iwe kugona akati kuroorwa?
Jenn • Mbudzi 7, 2013 pa 9:50 pm • pindura
Ndinorangarira kana iwe uye Jessica kutanga kudanana! I kuzodzokera vanokurudzirwa kukuona vaviri kupfuurira munyasha dzaMwari. Iri raiva Blog kukuru uye ndinofunga kuti angave chichisunungura vanhu vakawanda vanosarudza kutarisa mwoyo munhu pane rokunze.
Taurai: Reading Highlights: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
Joel • Mbudzi 12, 2013 pa 4:25 pm • pindura
“Mhanya nesimba uye nokutsanya akananga muponesi uye kana ukaona mumwe munhu, pakona ziso rako akamhanyiswa chete mirayiridzo, unofanira kutora kechipiri Kutarira”
Rachael • Mbudzi 27, 2013 pa 4:08 pm • pindura
Absolutely rudo ichi! Ndiri kukurukura izvi nevabereki vangu. Vabereki vangu vane vanaamwene yokuti ndikawana pachangu kuziva vakomana vakasiyana rudzi. Kunyange zvazvo ini handina nguva dzose kunge kuziva zvikuru nokuzvipira vakomana, kwave nguva ndaida murume zvikuru okuzvipira, asi nokuti akanga asina chena vabereki vangu acharega chose uye vairambidza chero ukama navo. Ndiri zvachose kuudzawo ichi navo, netarisiro ichi kuchaita usvinudze meso avo.
Tasi • Mbudzi 30, 2013 pa 11:15 pm • pindura
Hanzvadzi konama, Mashoko akafanana vendudzi ukama zvinofanira kutorwa kubva vocabs dzedu. Pane chimwe chete-rudzi rwevanhu.
Maurice • Zvita 6, 2013 pa 2:59 pm • pindura
Kumbozviona kuti nzira. Handisi musaruraganda, asi kukura rangu, paiva pfungwa Vakadzidzisa isu mutsika dzedu kuti vaireva kuti vasikana chena chete vanokudai uye kuvenga mhuri yako. Vanoda kuti akavharwa. Saka vanasekuru vangu nguva dzose akati “kana uchida isu kwete kuuya kumuchato wako kana kwete mari imi kushanyirwa pamba kwako, kuroora musikana chena. Nekuti iye haruzotibvumiri kuti pedyo nemi.”
Abby • Zvita 9, 2013 pa 2:55 pm • pindura
Ndinobvumirana okugumburisa Lee
Ndinofunga kuti kana unomuda zvikuru uye naMwari ndinoti wadii
Ndinofunga rakanga Gods kuronga kuti kusangana Jessica !
Abby • Zvita 9, 2013 pa 2:56 pm • pindura
Btw ndinoda wako rwendo mumhanzi Lee
Taurai: Blog Casserole – 12/13/2013 :: Carey Green - Podcast mugadziri, munyori, mutauri, entrepreneur, muchato & murairidzi mhuri, uye vaneshungu muteveri waKristu.
Livy • Zvita 17, 2013 pa 9:23 pm • pindura
Hazvina shamisa. Ndiri chena (chikamu Hispanic, asi hakuna munhu aizoziva nokutarira neni), uye murume wangu chena, asi iye achibva kunyika uye ndiri kubva muguta. Iye kubva kumaodzanyemba, uye ndiri kubva kuchamhembe. Hatina kufanana nokuti ganda redu zvenzwi akafanana. We kufamba nekutaura uye muitiro zvinhu paces zvakasiyana, uye mhuri dzedu zvechokwadi akasiyana, asi isu kudanana, uye Mwari akatibudisa pamwe. patsika, Zvisinei, zvinotora kutojaira tose. kuti, pamwe nokuva zvakaenzana pajoki kushumira Jehovha, ndiko muchato nezvei! Farai imi akataura!
Teboho Sekhosana • Ndira 13, 2014 pa 5:47 ndiri • pindura
Mwari wedu Chinotyisa akatisika nomufananidzo Wake,saka ruvara haritauri imwe thing.Love iwe hama yangu
Corina • Ndira 19, 2014 pa 11:40 pm • pindura
Ndizvo nyaya runonakidza………kunyanya mudzimai wako…imi vakomana makaropafadzwa. …AMENI kuti nyaya muUri! !!!
Donald • Ndira 25, 2014 pa 7:17 pm • pindura
ngaavongwe nokuti kutaura
Amanda • Ndira 26, 2014 pa 9:16 pm • pindura
rwendo! Chekutanga, mumhanzi rako rakanaka uye kushamiswa mukanwa. Ndinoda nemashoko aunoparidza neimwe uye rwiyo ose chete. Ramba zvinoshamisa tarenda Mwari akakupa! Interracial ukama uye michato zvachose naka. Hazvifaniri basa chii rudzi mumwe, asi vakaita iwe wakati, munhu Godly murume. Ndiri Caucasian, asi akafarira varume American African upenyu hwangu hwose. mhuri yangu chaizvo, chaizvo, chaizvo kugamuchira izvi. :) zvisinei, Ndinonamata kuti Mwari anotumira ini chakarurama, uyo ane naanamai uye unhu hwakafanana nohwake. I kwazvo munhu anoti vanoda Kristu kupfuura ivo vanondida, kudza, uye zvinozipa. Izvi akasvinudza meso angu kunyange kuva yakazaruka vemarudzi ose panzvimbo chete vatema. Mwari Ropafadzai iwe Jessica!
Terrice • Ndira 29, 2014 pa 11:39 ndiri • pindura
Iri raiva nyaya huru… Ndinonyatsonakidzwa kuverenga Blog renyu. Tinotenda kuti kugoverana nyaya yako uye kuva saka yakajeka. Ishe ari kushandisa imi mune dzakawanda chaizvo nzira! Mwari komborera!
the • Ndira 29, 2014 pa 9:55 pm • pindura
Wow, munyaya ino rinotyisa! Rumbidzo kuna Mwari! rwendo, uri munyori here dzakanaka. Ndakanzwa sokuti ndakanga kuverenga dzorudo yokufungidzira kana chinhu apo kuverenga kwako romukova. Yakawanda kunyemwerera uye “awwwwww!” LOL Tatenda kuva okuzvipira simba pamusoro fronts zhinji kudaro.
LeisleyAbrahams • Ndira 30, 2014 pa 2:41 ndiri • pindura
Thanks Trip ndiyo nzira yakanakisisa yave akatsanangurira kwandiri nokusingaperi!!My musikana shamwari uye ini uchinyengetera uye vakamirira Ishe inotevera step.I'm dema uzere tsvukuruka African uye Iye wacho white..I'm nguva dzose kuwana mibvunzo kuti nei ndinofarira wake uye kwete vasikana ganda rangu asi zvose ndazviwona maari mukadzi umwari moto Jesu, Anoda Jesu kupfuura pachazombova rudo iye ini uye ndicho chinhu zvandinoda muupenyu hwangu life..You ndomene akafuridzirwa #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
Taurai: Morning Mashup 01/31 | Theology Zvinhu
Aprilci • Kurume 3, 2014 pa 8:41 pm • pindura
Ndinonzwa kufara kuti iwe akatora nguva kuti anyore ichi. This post ndiye asingashumbi mhando, tambotaura nezvazvo (Heck, Handina kunyange aiziva peji ino aripo kusvikira nhasi). Kunyange zvakadaro, Ndinofara iwe akanyora izvozvo…Ndinofunga chikamu zvakakonzera yangu kufarira zvikuru yaiva sarudzo nyaya yose. I akaroorwa munhu 5 makore (tine 3 vana pamwe chete) vakanga vasingadi kuti kuroorwa zvakare nokuti mashoko ake—Handina sarudzo yake (angadai vanowanzoshandisa chokoreti aizikirimu / Vanilla aizikirimu Ringanidzo kuedza kuratidza pfungwa dzake–sarudzo yake aiva mukadzi ane neIkoniyumu….”zvakanaka” muviri–Ndinenge kuusiya kuti). The kupenga ndechokuti oita Rap wechiKristu—(????). zvakadaro hazvo, Ndinofara kuona kuti iwe famba panzira yakarurama—kuisa zvido zvaMwari kupfuura wako zvenyama…..zvakadaro hazvo, ramba Ida mudzimai wako akaita Anoda Kristu Church….Ndinenge chengeta mose muminyengetero yangu…..
Your College Companion • Kubvumbi 17, 2014 pa 5:49 pm • pindura
Kazhinji Handisi kuverenga nyaya vanyora, asi ndinoda kutaura kuti ichi nyora-up kumanikidzwa chaizvo ini kutora Kutarira uye kuita kudaro! Your kunyora Style yave ini vakashamiswa. Ndatenda, zvakanakisa romukova.
IMWEWO • Nyamavhuvhu 31, 2014 pa 1:45 pm • pindura
Hongu. chikonzero Same ndakaroora musikana chena. Ndinokutendai nokuti kugoverana. Good iverengwe. akanyatsodengezerwa kuisa. Mwari akuropafadzei uye mukoma mhuri yako. Rumbidzai Ishe, foreal kunyange pakudzvinyirirwa.
Tgirl • Mbudzi 22, 2014 pa 9:24 pm • pindura
tsime, Ndinofunga vanhu zvakawanda akakatyamadza chokuti mashoma AKANAKA KABHUKU vanhu dzichiitirana mudzimai-White vakadzi uye kwete isu VAKAWANDA vakadzi KABHUKU. Zviri Zvinosuruvarisa kuti rusaruraganda mhinduro dziripo, asi chete nzira vanhu vanonzwa, mu kunyanya, vakadzi- kuti vari Black. Ndine miviri zvinodiwa mukomana wangu Latino & Ndine Black uye izvozvo zvakanaka (nokuti Black vakadzi zvevakomana kunze nedzinza ravo). On Ukuwo, kana Ndinoona vakadzikama (izvo vashoma chaizvo) Black murume ane / Other mukadzi White, I kufanana dạng mumwe wehama dzedu aenda…zvino izvi chete kutaura kubva pamwoyo rusaruraganda kana kwete. ndizvo zvazviri.
Taurai: A Married Man | musoro wenyaya
Jeff • Zvita 4, 2014 pa 10:05 ndiri • pindura
Hey Trip, Vongai zvakanaka kwazvo uye kufunga norudaviro mubvunzo wakaoma. Kufanana iwe Handina kutevera mudzimai chero apo ndakasangana Michelle. Akanga kuwanika uye ndakanga kuwanika uye takaona nyika chete nzira. nhangemutange yedu haisi chinonyanya zvakasiyana chinhu pamusoro pedu uye kutenda kwedu ndicho chinhu zvinotiswededza kubatana. Ini chete yomusi uye akawana vakadzi vatema ani Ndakaroora zvakawanda zvandinovimbisa (mwana) netsika kutarisira kupfuura mubereko namazano. Sezvo ndakanga ndisina ukama naMwari kutsauka kupota chechi kushanyirwa Ndinotenda ndakanga achirwara akagadzirira muchato. Nepo ganda redu ruvara ndiye takava tsika yakasiyana chaizvo uye pashure isu vakaparadzana uye vakarambwa Mwari mumoyo wangu wakaputsika neni ndiporese. Ndinotenda chaizvo kuti mudzimai wangu ushingi kutarisa rangu kwaniso uye kwete yangu kare uye vanondida mhiri rweganda. vana vedu uye ushumiri chechi yedu kuratidza rudo rwaMwari vanhu kubva ose kufamba muupenyu. Pfungwa yacho iri Umambo sezvo equalizer munyika huru uye Jesu saIshe zvose.
Jeff • Zvita 4, 2014 pa 10:39 ndiri • pindura
Hey Trip, Vongai zvakanaka kwazvo uye kufunga norudaviro yakaoma musoro. Kufanana iwe Handina kutevera mudzimai chero apo ndakasangana Michelle. Akanga kuwanika uye ndakanga kuwanika uye takaona nyika chete nzira. nhangemutange yedu haisi chinonyanya zvakasiyana chinhu pamusoro pedu uye kutenda kwedu ndicho chinhu zvinotiswededza kubatana. Kare ndakanga yomusi uye akawana vakadzi matema kubva zvaunosungirwa (mwana) netsika tarisiro (mhuri) pane yakawiriranwa rudo. Sezvo ndakanga ndisina ukama naMwari mhiri kuchechi, Ndakanga achirwara kugadzirira muchato. Nepo ganda redu ruvara ndiye takava tsika yakasiyana chaizvo uye pashure isu vakaparadzana uye vakarambwa Mwari mumoyo wangu wakaputsika neni ndiporese.
Ndinotenda chaizvo kuti mudzimai wangu ushingi kutarisa rangu kwaniso uye kwete yangu kare uye vanondida mhiri rweganda. vana vedu uye ushumiri chechi yedu kuratidza rudo rwaMwari vanhu kubva ose kufamba muupenyu uye hwedu nezano kudikanwa nyasha dzake. The Kingdom mukuru equalizer munyika uye Jesu saIshe ose. Tichakunyengeterera mhuri yako uye ndapota munyengeterere Isuwo.
zvanaka • Zvita 18, 2014 pa 2:13 ndiri • pindura
Ndakabatana rwendo I kumbofa ndinogona kuwana munhu sezvo vamwe panzvimbo dzose nokuda lieying uye vaibira vanhu ndakanga makotsi zvimwe SMS ine na asi nepfambi havagoni kunzvenga hurongwa hwaMwari saka akanga akaita zvinofadza kwandiri chinhu ndakariverenga kuva shure maitiro angu aiva ani apo anondida asi kwete chete rangu dzinza pandakasvika chena American mudzimai vasina hanya rudzi,tsika chete munhu rudo & hanya naye “ndiani ini” Mwari zvose zvinobvira ihama yangu here sarudzo.
zvanaka • Zvita 18, 2014 pa 2:19 ndiri • pindura
Ndakabatana rwendo I kumbofa ndinogona kuwana munhu akatendeseka vamwe panzvimbo dzose nokuda andimukire uye vaibira vanhu ndakanga makotsi zvimwe SMS ine na kutaura navo asi nepfambi havagoni kunzvenga hurongwa hwaMwari uyu akaita inonakidza neni uye ini kuriverenga kuva vatema mutemo wangu aiva ani apo anondida asi kwete chete dzinza rangu pandakasvika chena American mudzimai vasina hanya rudzi,tsika nezvimwewo… chete munhu akakodzera & hanya naye “ndiani ini” Mwari zvose zvinobvira ihama yangu here sarudzo.
Ryan • Zvita 27, 2014 pa 1:43 ndiri • pindura
Ndiri kufambidzana musikana uyo anoda nhema vakomana… uye ndine chena. Iye anovimbisa ini kuti iye anofarira chaizvo, asi achiri kusachengeteka rakakura kwandiri. Ndinovimba kuti zuva rimwe kuroora musikana uyu. Pane chinhu chakanaka iverengwe panyaya iyi kana chero mazano?
Maleshia • Ndira 8, 2015 pa 11:37 pm • pindura
Hongu Trip! Ini ndiri mukadzi chete dema uye yunivhesiti predominately chena uye ichi mhando kukurukurirana anouya nguva dzose pakati yangu yakaurungana dzechisikana vatema. Kunyange zvazvo ndine zvaunofarira varume vatema (Ndiri zvose rudo matema), Ndinogara yakazarukira kudanana kunze urudzi yangu nokuti hauzivi ndiani Mwari anogona kushandisa kuita musiyano muupenyu hwako. Ndinoona vanhu kuti ndiani kwakavakirwa unhu hwavo, mutambi, zvavo tsika, nezvavanotenda kupfuura chinhu ndiri kuziva kwavari. Runako kuita basa uye pane dzimwe nguva achinzi evanhu kuti anogona kunzwisiswa kana chinokosha mamwe akarerwa dzinza akasiyana netsika, asi izvi hazvisi dealbreakers. kana chinhu, vachataura kuti ukama kunakidza. nyaya yenyu yakanaka rudo nyaya yakadaro kuti neniwo kutarisira rimwe zuva. Zvese muzvese, haugoni kubatsira ani ukapfugama kumuda, zvisinei kana ravo dema, chena, yero, Barney pepuru, kana Ninja Turtle girini. Rudo waifarirwa runokurira ethnicities zvose. Isu sezvo vaKristu vakafunga kuda zvose kunyange kusiyana dzedu. Dzimwe nguva yenyu mweya naye, chechokwadi mutambo, upenyu naye, uye shamwari yepamwoyo munhu ane chose kunopesana ani here akafungidzira pachako kuva. Zvinondifadza kunyemwerera kunzwa kuti kuvambundira sei iwe vakakweverwa Jessica vanozvininipisa, tsitsi, uye aitya Mwari mukadzi kuti iye uchiri. mubatanidzwa wako testamendi wechokwadi kuti aitenda kwako muna Mwari runokurira kusiyana zvose. acharopafadzwa.
maka • Kukadzi 22, 2015 pa 3:17 ndiri • pindura
Hey, Ndinofunga iwe. Ndine Australian Aboriginal nhaka uye ndinogara aida kuroora mumwe Koori (Aboriginal) asi nekuda nemagariro uye amadzitateguru zvitendero zvakaita kuti zviome zvikuru. Ini dzakaguma pokuroorana Anglo Red musoro. Asi iye anoda Jesu uye ndizvo chinokosha.
Isaac • Kubvumbi 9, 2015 pa 11:50 pm • pindura
Blessed kuziva handisi zvakaipa njanji sezvo ndasvika pedyo nguva Ndichaita sarudzo upenyu naye!
Jamel • Chikunguru 12, 2015 pa 9:17 ndiri • pindura
cece • Gunyana 24, 2015 pa 3:56 pm • pindura
Mwari akuropafadzei uye mhuri yako muna Jesu zita hazvina basa chii kusimudza uri zvichikosha pamusoro sei kubata iwe uri mufundisi yakanakisisa nokusingaperi zvechokwadi
Ezra • Mbudzi 6, 2015 pa 3:17 pm • pindura
"Zvino zuva rakati rovira, hope huru dzakawira pana Abhuramu; uye, izvozvo, kutya nerima guru zvakawira pamusoro pake. Zvino wakati kuna Abhuramu, Uzive kwazvo kuti mbeu yako ichava mutorwa munyika isiri yavo, uye vachavashandira; uye vachatambudzwa makore mazana mana; Uye kuti rudzi, rwavachava kushumira, Ndichatonga: anofanira uye pashure vachabuda nenhumbi zhinji. "
Maererano Song of Solomon 1:4-6:
"Ini ndiri mutema, asi ndakanaka hangu, Imwi vakunda veJerusaremu, Samatende eKedhari, sezvo machira yaSoromoni. Usatarira pamusoro pangu, nekuti ndiri mutema, nekuti zuva wakatarira pamusoro pangu: mai vangu vana vakatsamwa neni; vakaita ini muchengeti yemizambiringa; Asi munda wangu wemizambiringa handina kuuchengeta. "
Asiwo Numbers 12:10-15 rinotaura kuti Mariam wakatukwa naMwari apo iye hariremekedzi muporofita wake, Saka Mariam akanga vakapfekenurwa kwake Hue kana ruvara ava sechando. Ndyaringo kuti maatomu akafanana izvi kuti vaKristu vakapondwa tsika wose uye kuvaRungu vanozviti ndivo vakasarudza vanhu, kana bhaibheri ndiro rechiHebheru bhuku pamusoro Mwari muIjipita kutaura kuti Israeri / Jakobho akaberekera 12 vanakomana dzikabereka rudzi rwaIsraeri vari vatema, sezvinoita nhengo dzose Mutsvene Dzinza.
Ndinoziva ani ndiri. Uye handina inoshora Nubian vanhu kudanana / kuroora vanhu chena. Ndaisazombofa kuzviita, asi chete kunowedzera muitiro, kuti rugare runogona nhaka Earth pane zvatiri tichitsungirira ikozvino.
Nathan Yonas • Mbudzi 26, 2015 pa 1:01 pm • pindura
Mwari ropafadzai nepfambi & mhuri Ur continously
PK • Zvita 24, 2015 pa 3:08 pm • pindura
Ndiri kufara Ndakawana this post. Ndinoti dai vanhu vakawanda munyika vendudzi ukama vakaratidza them9 saizvozvi maringe rine kuisa pasi mamwe mapoka evanhu. In kutendeseka zvose, Ishe yave kushanda pamwoyo wangu kana toreva nezvenyaya iyi. Ndaive havana hanya zvachose nezvake munhu akanga achifambidzana / vakaroorwa rudzi kutaura. zvisinei, vamwe kunaka nazvo pamwe vendudzi vakaroorana uye ano Anti-dema mukadzi rwokufamba kundisiya jaded. Asi tinotenda Mwari nenyasha dzake, nekuti Ari kudzorera mwoyo wangu uye kuzarura maziso angu kuti ndione vanhu uye muchato nzira yakarurama – kunyange vaya ataure kunaka mafungiro wandiri akananga dzinza kuti.
jony marvo • Ndira 3, 2016 pa 4:18 pm • pindura
tichitarira foward kuona mukadzi chena kuti zvichaita kuita uye kuwanikwa neni ani ndinemwi nani kana chakaipa zviri kurota kwangu
kana • Ndira 25, 2016 pa 1:44 pm • pindura
Zvandinoda kutaura akasuruvara chaizvo .. Ndave kubva kumabvazuva venyika uye Ndakaroora wangu musikana chena.
ayo oma ari cultrual musiyano.. Tiri kuwana kurambana.
mhuri doesnt yangu anoda kusangana neni uye ini Haumbomuki kuchinjwa mhuri yake.
Aiva vakadzi akakwana ndinogona neShanduro, tiri kurambana nokuda vendudzi nyaya..
Vabereki vangu vari kurwara uye vanoda kushanyira US uye ivo pum kuzogara mudzimai wangu. Ndiri musoro wemba saka ndine takecare mhuri yangu backhome.
Im kugumbuka, kunorira izvozvi becuase kuitika kwayo zvino tiri kuenda thru kurambana .
chipo • Kurume 5, 2016 pa 1:59 pm • pindura
Wow. Izvozvo simba chaizvo, Zvinokurudzira uye meso edu kuona zvinopfuura nemaziso edu nokuti maviri vanhu vaMwari vabatane navo kuti azadzise chinangwa chake.
TheHonestTruth • Kurume 27, 2016 pa 1:15 pm • pindura
Well ndiri munhu chena murume Good uye ndichiri Havagoni kusangana mukadzi Good dzikamhara pamwe kubva vakadzi nhasi zvikuru akasiyana pane kare.
Eric • Chivabvu 2, 2016 pa 12:22 pm • pindura
I zvechokwadi aigona hanya zvishoma chii urudzi mukadzi wako, asi zviri zvisingatendeseki kunzwa muchidana ichi (kana ani) nyaya tichizvininipisa uye nechivimbo chakadaro. Ndinokutendai nokuti kutsvaka Mwari pakutanga.
Brooke • Chikumi 4, 2016 pa 5:06 pm • pindura
By nhoroondo zvose mashoko aigona kuva truer, nokuti mutendi kana kuti kwete. Ndinofanira zvinosimbisa Ungashandisa kurutivi zvakananga,” Handina nehanya, kwazvo, chii dzinza mudzimai wangu aifanira kuva, sezvo ini wokutanga sarudzo vangadai achimuona sezvo dema.” Kufanana zhinji, Handina stuggled Kutenda wangu kutsvaka basa iri kuda kwake, asi ndinotenda nezvose ini, kuti Achaita nditumire zvinodikamwa nomoyo wangu ( kwete zvatinofarira) nokuti ini, Ndinotenda kuti apo tisingabatanidzi rekutsungirira kwangu uye / kana Kutenda kukura. Sezvo ini anobvumirana nyaya yenyu sezvazvakaita uchapupu KWAKO, I zvakafanana abate nyaya makamirira sokuti zvisingabviri nokuti kutungamirira nechido, vanofanira, kwete kushayiwa. Kuva chaiwo: Ndingada panyama vanoda kuva boka David Beckham, Chris Hemsworth, uye Ben Affleck (kana kuroorwa), asi handina kuda kuroorwa navo; kwete kana mwoyo wangu anoda kunaka, simba, mutambi, uye vakashinga zvinoshamisa-akasika dema murume! Akanga takaramba munyika pachivi, ichi pamwe haana kuva nezvakawandisa nehanya, asi munyika zvakanga zvakadaro kwazvo-akaita munhu yave dzakaora, nyadzisa, vaikurovai, kuremekedza, nezvimwewo…I kufanoona hapana chikonzero haana kupedza rwendo rwangu naye vakatumwa naye. pashure, zvangu, akapiwa yanhasi disconcerning mienzaniso murume mutema, Ndinoda uye vanoda mwanakomana wangu kuona kuti chii kamwe zvakanga, (munhu akanaka akafanana nababa vake asati apfuura) vanogona uye achava zvakare…….
Zaira • Chikumi 25, 2016 pa 2:37 pm • pindura
Zvinofadza kwazvo uye chikomborero muupenyu hwangu, Ini nomurume wangu tine kutanga mbereko 8years zvino nokuda kutadza kwangu ini asununguke uye yava inotsidza mumwoyo nematambudziko ezuva nezuva kumba kwangu,saka ndakashanyira shamwari hadzi iri Florida,uye iye akauya aine pfungwa nokutungamirirwa mwana izvo zvandisina kumbobvira aifunga,uye ikozvino l hapana sarudzo pane kushandisa mwana uye zvinoshamisa angu zvose vakaenda nyore uye nhasi ndiri kufara pamwe Hansom mukomana muduku(njere)Ini kushandisa kubva Inter nyika mwana wokugamuchirwa centre.
Mary • Chikumi 28, 2016 pa 10:22 ndiri • pindura
Izvi zvinoita ini chaizvo relief.That waiva chisarudzo chakanaka kuita. Hauzivi kana munhu zvakarurama kunobva around.No pasinei rudzi I achanamatira kuti sezvo ini hamuneni kuva nyaradzo rangu mapazi ane American.That African kuti ndinogona kubuda bhokisi. Ndafara chaizvo mashoko aya yamakapa . Mwari vakuropafadzei uye mhuri yako vakawanda zvikomborero zvakawanda muupenyu hwako.
Andrew • Nyamavhuvhu 18, 2016 pa 1:04 pm • pindura
Marcus • Gunyana 13, 2016 pa 9:00 ndiri • pindura
Great mose imi vakawana vana vaMwari. Tinofanira kuroorana vanhu vanoziva sei kuti kuda kwedu uye kuti kuda achatipa! Info ichi nokuda daters chete–kwete vakaroorana; saka, kana uri kuroorwa, gara kuroorwa, NDAPOTA! Kana uri kufambidzana, wobvunza Mwari kuratidza ani muri vakafunga kuroorwa–nekuti hauzivi pachokwadi! Vanhu vanogona kuridza zvakanaka-zvakanaka / munyengeri zvakanaka nezvikonzero zvakasiyana uye anokunyengerai, vanhu vanogona kuva vanhu vakanaka(asi kwete kurudyi imwe mugwagwa Mwari ane kwauri–Haienderani PAKUNAMATA–kunyange 2 vana vaMwari muve 2 Migwagwa siyana kuti murege mumutsetse; yeuka bhaibheri ndima apo Ndinotenda vadzidzi vakatsiura munhu waMwari nokuti akanga asina chokuita zvakananga; Jesu’ mhinduro inoratidza kuti vanhu vanogona kuva zvinogamuchirika mishoni kuna Mwari, asi kuchipesana; ipapo zvakare, Mwari akaudza Hosiya kuti aroore pfambi–kana ndangariro dzangu anondishandira nemazvo). saka, nokusarudza isiri imwe(dzimwe nguva, mwana waMwari anogona kuva isiri imwe iwe), unogona kuwana zvikomborero kuti chete inogona kukiyiwa tiine munhu. Unogona kunyange kutukwa kwamuri; vana vako kuti vave ndonda kana kufa vamwe usati; ungasakwanisa mubereki akakukodzera mwana; muve mbereko kana mbereko kwenguva refu; mudanane uye chinhu kuchiri haana kunaka; unogona kuwana munhu akanyengedza iwe(pane varoyi, masvikiro, vanyengeri, chisimba kuinwa zvakapfurikidza mwero, hanya naggers, cheaters, ascribers kuvhura pabonde kana LGBT nemararamiro, mupfungwa kusagadzikana vanhu, ascribers kuti kurara nemhuka–uyo chete kushandisa mhuri dzinovaraidza sechinhu chokufukidzisa, hakuna Musiki kana agnostics–uyo vakashandisa chitendero kuti kuhwina iwe pamusoro, nhema, ari narcissistic kana udyire, zvidhakwa uye drugheads, conpeople uye kuwana mari zvisiri pamutemo, vahedheni / satanists, simbe vanhu, ari zvechihwana–isakarurama kutaura, ehe saizvozvo, nhaurwa kuinwa zvakapfurikidza mwero, cursers, vanhu asingazombofi vachapfidza, Serial vaurayi, vanoshinha / emakunakuna vanhu, nezvimwewo. Kunze Uko).
Zvamunokumbira Mwari, nekuti Ane hurongwa newe uye nekuti(kana iwe kuramba kuti chero chikonzero) ndicho yangu kutenda nomwoyo wose kuti urege vakafunga kuzoroorwa zvakare kusvikira wako afa(kana pabonde zvakare kune avo vari manomano). Hausi vakafunga kuwana akarambwa nguva(kunze pabonde kusatendeka), asi iwe unofanira kuva pasina pabonde kana kuroorana kana muchiita chipi chikonzero. Unogona kutaura chokwadi kuti kana iwe(kana mawana munhu chinokatyamadza nomukwanyina uye iwe unogona kuimwa–izvozvo hazvifaniri kuitika kunyange zvino, asi chii zvinonyanya kuzoita) kana wawakaroorana naye ndiye chikonzero nei kuti vakarambana kuti unogona kuenda pasina kwevakaroorana pabonde kwenguva kuti aende panze dzenyu dzepabonde Prime(ichi nguva aigona kuva emakore anoverengeka)?! Ndosaka UNOFANIRA VANOBVUNZA MWARI WHO ukawana! It haambotauri chivi Papera(nekuti iwe zvingangokukunda kana angasadhakwa rombo, asi Anoziva) uye rwendo rwenyu wechiKristu maximized! Ko kana Mwari asina kupindura zvomumba nyaya yako(vana, wo) minyengetero–kubvumira ukakohwa zvawakadzidziswa chinodzvarirwa kusarudza kuroora yezvikonzero zvake chete?!
Marcus • Gunyana 13, 2016 pa 10:59 ndiri • pindura
On imwe nyaya: pane dzimwe dzimba(kana uchiziva Mwari akasaina kure pavari–womukumbira kuti uve nechokwadi; usafungidzire) kuti zvinogona kukumbira dambudziko: 1. BMWF vanoroorana America: tiri kurarama munyika chena mberi, vavariro rusaruraganda! White racists vane chisimba pamwe rusaruraganda kupfuura boka kuti I ndamboona! Dema munhu nhamba muvengi 1! Vanoisa zvinhu zvinonyangadza nezvokudya zvako, vatema uye vavo vana vanogona kuwana tsvina / utachiona-zvakafanana norwonzi kumbundirana uye handshakes, zvitsinga / kutukwa anogona mukafuka kana ake mbudzana, cops profile uye utsinye nevarume dema zvikuru rinopikisa kana kuroorwa BMWF kunoparidzwa sezvo uri zvekugadzirisa, ivo vanosarudza mhuri, ivo “nepotize” wakachena chena vemumhuri(vana, wo) uye rusarura vakavhengana nhengo(vana) uye munhu mutema, kwavanokunyunyutira nako zvavo “vavengi”, akarwisa uye / kana kuuraya vanhu vatema, vamwe mukoma / hanzvadzi ukama achava hungakanganisika kana inimical uye zvinenge zvose chena mukoma / hanzvadzi-nemadzitezvara Hapana vane kana ane inimical ukama hwavo ishamwari dema, Vadzidzisi tisingazvioni villify, nezvimwewo. Ungafungidzira zvimwe vana venyu musina / serisina ukama nemhuri dzavo rwaamai? At Christmas: vana chena kuwana $150 chipo chinobva nhengo ichi, asi vana venyu kuwana $25 chipo kana chinhu. Ungafungidzira kana chinhu chakaitika waunoda(murume kana mwana) uye ichifunga kuti mhuri yako aiva chinhu chokuita nayo uye vasingakwanisi kuzviratidza? Vakawanda izvi zvinogona kutarisirwa; asiwo, vakaroorana izvi kugadzirisa zvinhu nevamwe Dzimba kugadzirisa, wo! mari, epamba musha / pfuma kutarisirwa, havashandisi mari mhuri(dzimwe nguva zvisingatarisirwi), vana hurukuro(YAKANYANYA uye kunoda nguva yakawanda kupfuura vamwe–kunyange kukurudzira mwana wenyu kuziva kuti musaruraganda nevachena kuvaona sezvo dema uye tiine mwero kuti / iye anoda vabereki vose uye vanhu vose chete azvaitwa), mabasa, kupedza nguva neshamwari dzako kuti varambe shamwari dzako, nezvimwewo. Pane kudaro zvikuru kuenda inoita muchato vasingafari, kana Mwari haana ugadze nayo!
2. Michato apo pane mukaha mukuru wakaiswa pakati uzivi hwechitendero kana apo huru dzidziso dzechitendero vari pakatarisana kana haienderani. Ingobvunza Mambo Soromoni. Christian uye Muslim. Christian uye chiBuddha. Christian uye ChiHindu. Christian uye kusatendera. Christian uye Satani(illuminati, freemasonry, uye avo mamwe mapoka uye ukama). Iva nechokwadi chokuti Mwari anoda iwe ipapo vasati vapinda, nekuti Mwari anogona here kushandisa kutendeutsa munhu kana mumwe munhu ari parwendo rwenyu vachateerera!
Brian • Zvita 28, 2016 pa 6:25 ndiri • pindura
nyaya Good, hazvina nokuremekedza kutaura mweya wangu.
Mwari vakuropafadzei nemhuri yako nokusingaperi husingaperi.
Joel • Ndira 2, 2017 pa 4:03 pm • pindura
Izvi zvakadaro Awesome. Ndinochida. Mwari vakukomborere.
Mbah Joel • Ndira 2, 2017 pa 4:04 pm • pindura
Izvi zvakadaro Awesome. Ndinochida. Mwari
JoshuaKirkland • Ndira 7, 2017 pa 2:42 pm • pindura
Ndinoyemura nemotokari yako, rusimbiriro, chido, & kutenda. Chokwadi kuti chirwere ichi unacho akaita kuzonetseka iwe & Chaizvoizvo akaita upenyu kukuomera zirokwazvo pusa! zvisinei, iwe perserve & kurwa kuburikidza zvose izvi & ramba kupedza zvinhu Mwari kwauri. Pandakanzwa kuti Unashamed Tour pamusoro 2012 akanga wokupedzisira boka rwokuparidza yako, pfungwa dzangu vakatanga kushamisika kuti sei muri yakarembera naro. Pandaizongoziva kuti iwe wakange yako kuneta nyonganyonga & kuti iwe vakanga tichiita chinono munhu internship yomufundisi, Ndakatanga kunzwisisa kuti Mwari aiva nechimwe chinangwa here. Apo Rise akasunungurwa, Ndaiva SOOOO zvikuru! murume, Ndaiva soooooo hype! Kukuudzai chokwadi, The Good Life aiva 1st wechiKristu Hip-Hop Album ndakateerera & yakatengwa. Kubvira ipapo, Ndanga akapindwa muropa zviende hip mumhanzi kuti arumbidzwe naJesu. mumhanzi Your kwave saka zvakakurumbira hwangu. Ndinonamata kuti urambe kundorwa kuburikidza matambudziko ako uye tinzwe umambo! #116
ruva • Kurume 8, 2017 pa 3:10 pm • pindura
nyaya Wonderful. Ndiri kufara kana iwe. Ndiri akaroorana kwangu urudzi asi kuti hamuna kundiponesa kubva wenhamo ndiri mupenyu upenyu. Ini chete ndakaramba muchato wangu kudzivirira vana vangu ramangwana uye Mwari anovenga kurambana. I kurarama mugehena vachitarisira kuenda zororo.
Achi • Chivabvu 7, 2017 pa 5:57 pm • pindura
Rudo zvose…ruvara chinhu…
LaKiKI • Chivabvu 11, 2017 pa 9:57 pm • pindura
Muri achiedza kugombedzera kwaunoda? iwe, isu kana? Kana iwe akatora mudzimai wako zvechokwadi, nekuda MWARI nyaya ino haana kurarama. Haufaniri mvumo. Ehe, Ndiri chokwadi paiva zvakawanda Black Godly vakadzi vakanga sezvo zvinoshamisa sezvo mukadzi iwe wakasarudza. Asi iwe ndisingadi, kana aiva mubereko. Chido chako waiva mukadzi wako. Izvi zvakanaka. Just kurega kuedza kuzviruramisa nayo, sezvazvakaita pusa uye anozvideredza.
NDIRI Guessing chete Anotaurawo kuti cosign chinzvimbo chako kuti neawakatumirwa, asi ini achaedzazve. Free kutaura nyaya!
James • Ndira 23, 2018 pa 1:46 pm • pindura
WOW ZVAKANYANYA. Unofanira kuenda kuna Mwari uye kuwana shoko. I dont funga unoziva zvauri kutaura chikonzero iwe pachena vatadza kuona pfungwa iyi. Im kufunga iwe dont kuona chinangwa achiita izvi kubatsira uye kukurudzira vamwe chete mamiriro ezvinhu. Nzira iwe akauya kure unorira ayo wakagumbukira kana mukusaziva kana zvichida kunyange prejudence pacharo nokuti munofunga kuti kuedza kuti varuputsire mune marudzi vanotarisana iye nomukadzi chena uye Ndiko handizvo. Zvinoita sokuti iwe unopenga iye ane chena musikana nguva.
Tiffany • Chikumi 27, 2017 pa 5:55 ndiri • pindura
Chii chirikuita Trip. Uyu Tee. I chaizvo nyaya ino. Kunyange zvazvo ndine makore shure. Lol. Asi chokwadi pane chikonzero ndiri chete vachiona izvi. murume wangu chena uye iniwo akakura vachifunga pachangu murume mutema. Asi Mwari akasika ndive akasiyana. Kunyange kukura ndakanga inotonhorera mbudzana pamusoro misa, aizivikanwa somunhu mumwe fellas. Zvadaro kukoreji ari fellas zita shanduko kana vaifunga ndakanga akanaka. Asi nekuti ndiri mupurisa kuti kwaiva kwakaomera munhu mutema kwandiri kutsigira pamusoro. Saka ndaibatanidzwawo akaropafadza pa 30. 3 Makore hwakasimba zvishoma musikana akanaka. Ndinongoti anogona kuuya pamwe chete nyika uye muzive rudo haana ruvara. Mwari komborera
P.S. My Lil mukoma mudzimai Asian, akaroora 9 makore. Amai vangu anodana isu wake utsotso muhari rudo.
CAPTJIMJIMANAMBO • Chikunguru 16, 2017 pa 7:59 ndiri • pindura
Imi makaropafadzwa ME.
Millz • Nyamavhuvhu 5, 2017 pa 10:35 ndiri • pindura
Nomudzimai wangu uye ndinoonga kukurukurirana kwakadaro tichinzwa mhando izvi nhoroondo sezvo “touchy” sezvo vanogona vanofanira kugadziriswa munzanga yedu uye zvakakosha sezvo vaKristu. Ini ndiri muduku mutema murume pachangu, mudzimai wangu, ndiani chena, ndiro gore nomwe mudiki. Isu vaviri vanoda Kristu zvikuru. Sezvo tinotenda zvechokwadi kuti kuburikidza neminyengetero Kristu akatipa mumwe. ikozvino tiri vabereki vana vana dzakanaka dzakadaro mumhuri. mubatanidzwa uyu akasika Mwari kwatiri zvirokwazvo haana kuuya zvipingamupinyi ayo isu vakarasikirwa shamwari uye mhuri munzira kuti tichiri tinyengeterere. Chokwadi chaMwari kwatiri ndizvo kumbobvira chii isu nechinangwa. Uye Bhaibheri chock izere rako kuti vanotaura pamusoro hwaMwari wedu kuronga uye Yake pakukwana naMwari. (Hosea / Gomeri ndiye muenzaniso wakakwana)
Ndinofunga nyika maonero vendudzi mibatanidzwa vave hwakakanganiswa kubudikidza chirukwa rusaruro, venga, vamwe vakawanda vakaipa uye uipi zvinhu wakatambudza pfungwa vanhu kubva inception yedu. Ndicho chikonzero nei Bhaibheri riri chikuru rudo nyaya vose vachiri resonates kunyange pashure millennias izvi zvose.
Ini nomudzimai wangu takaona ruvengo urwu vomuzana ruoko zvetsika dzedu uye kunyange vamwe kwete redu pachedu. Zviri kunyange kunakidza kana zviri kubva munhu anoti muKristu kana vaya vasina kupatsanurwa kwekusaziva kwavo. Kana izvi zvaitika kwatiri isu kuzviona sechikomborero nokuti tinoona chete sei pedyo tiri kunzwa izwi raMwari uye kwete zvedu. He (Kristu) panguva idzodzo chaizvo akakurova isu pamwe Galatians 2:20, zviri ipapo tinocherechedza kurwa tingada kuti harisi redu kurwa. Zvine nyore kunzwa kuti? Kana, Ivo chete kuzivisa mibvunzo yakaita: “OK, Handigoni murwisewo asi chii pamusoro vana vangu? sei I muvadzivirire pane ruvengo vanoona?
Ndipo paunoona kuti muchato wenyu aiva oga kwete chete, mumuviri rwendo asi rwomudzimu.
Ini nomudzimai wangu tiri kwedu repfumbamwe gore pamusoro muchato (pinza makuwende) uye hatina zvakawanda kusimba uye yakabatana nekuti tinoona basa redu zvino, hazvaikwanisa kuva zvikuru kudaro zvikuru zvakajeka. Kana bhaibheri rinoti tiri chiedza chenyika, isu zvechokwadi tiri! Uye vamwe kunzwisisa kuti, asi zvino iwe kuwana vashoma vanoti ivo: “Hongu! Chii iwe maviri Ndinoda kuti!”
Hama yangu Trip uye mhuri yake inoshamisa uye huine mhuri ndinotaura izvi,
rwendo yako uchangotanga mukoma wangu nehanzvadzi . Simbai muna Ishe uye reukuru hwake. Achakutungamirira refu saka iwe usambofa kuyerera kwaAri.
Pachava zvinovhiringidza ndinoziva vamwe imi angangodaro atozvionera navo kurarama South. Asi imi muri muenzaniso runako rwaMwari wedu wechokwadi, uye Ishe Jesu Kristu. Murudo muchato uyu zvinoratidza zvakanakisisa, nokuti bhaibheri rinoti akawanda nguva kuti “Nokuti hakuna rusarura munhu naMwari” – Romans 2:11
Mwari akuropafadzei uye vamwe vose pamusoro this post uyo zita zita raJesu Kristu
Achi • Gunyana 22, 2017 pa 11:55 ndiri • pindura
Ndikuitire Godwilling chete
Dawnn • Gunyana 22, 2017 pa 3:16 pm • pindura
BRO, I saka vaonge uye varemekedze iwe pamusoro this post. Ndanzwa wangu wakanaka mugove zvikonzero nei varume matema kuroora vakadzi rakasiyana rudzi / zvemadzinza. Uyu ndiwo mumwe shoma nguva Ndanzwa munhu brotha’ ataure kukosha unhu hwake pamusoro muenzaniso sei vakadzi rimwe dzinza vari nani kupfuura vakadzi mumwe urudzi. Uye zvechokwadi zviri nezvoUmambo chinangwa pamusoro sarudzo. Mwari wedu anogona kuramba akuropafadzei, mudzimai wako uye mhuri!
Trinitee Hudson • Gumiguru 20, 2017 pa 12:29 ndiri • pindura
mukoma wangu muna Kristu. Ndiri akaropafadzwa kudaro ino. Tinokutenda kubvumira shoko kudzidzisa uye kugadzirisa nyaya vanhu havanzwisisi.
Ndiri akakurudzirwa dzenyu pezvaaitsigira muwanano yenyu asi kushumira kwako chokwadi. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako.
Joshua Fordham • Ndira 6, 2018 pa 3:03 pm • pindura
Handisi kunzwa kuti nyaya yaidiwa. Handina kumboona boka revanhu kunzwa kudiwa kupembedza kuda kuroorwa chena sezvo Ndaona vanhu vatema varume vakawanda zvakananga rutema. Ndakacherechedza kuti vanhu vatema vanenge kufambidzana uye kuroora mapoka chena vasiri regai tuzvikonzero nei vakaroorana kuti asiri chena munhu. Kana vachiita, hakusi kuti dhigirii kuti vanhu vatema akazoroorwa chena.
Ini chete vanoomerwa nokudavira kuti marudzi avo vose vakadzi pachikoro vakanga kushumira Mwari uye kumuda kuti zvakazara havana kubata ziso rako asi musikana chena, mukadzi uyo akati richasviba murume kryptonite, kubatwa ziso rako kuroorana. Unongofanira aida kuroorwa chena uye kuedza kuunza Mwari kupinda kuti senzira sekusina ose uyu saka naMwari apo maitiro ichi asati avapo uranda.
Kana uchida kudanana chena kunaka asi kunyora nyaya zvinoreva pane chinhu kwete Vakazopinda pamweya yenyu.
Amen • Ndira 10, 2018 pa 1:04 pm • pindura
Ndosaka nei vakadzi vazhinji saka rutema vari pissed mazuva ano.
Joshua Storm • Kukadzi 3, 2018 pa 1:50 ndiri • pindura
Ndinobvumirana nemi, Trip Lee. Ndava kuziva kuti chose munhu Kunoumbwa mweya, mweya, uye muviri. Saka tiri zvisikwa zvomudzimu, nemweya, uye tinogara muviri. Zvinosuwisa chaizvo kuti vanhu vakawanda kutarisa “imba” asi chinokosha ndiwo mweya / mumwoyo munhu. Ndingada chete vanoda kuzodzosera zvinosimbisa ichi mumwe kunze uko kuverenga mashoko angu pano. Munhu ane mweya hwakanaka. Ane mweya (manzwiro uye pfungwa) uye iye anogara muviri wenyama.
Kuti jena kana dema ganda kuti vanhu vakawanda nguva dzose nokukurumidza kuziva kunongova imba kwatinogara. Mine rasviba, zvichida ndohwenyu vatema. Chidzore vanhu kubudikidza ruvara avo “imba” kwakafanana muchitonga zviri tsamba kubva Zvinoonekwa hamvuropu. Chikonzero nei vachiti “muviri wake wakanga waradzikwa kuti zororo” nokuti hamuzi muviri wako, asi iwe kurarama mairi. Kana isu tose akaonga chokwadi izvi, paisazova chero rudzi kana ruvara nyaya. Mwari ndiye okusika, aiziva kuti pasi rino yaiva kanivhasi ake, uye aisagona pendi zvose chena, kana zvose dema. Kunaka makanaka iri mubatanidzwa mavara, kwete chete. Ndizvo chaizvo nei tinofanira kupemberera mumwe nomumwe rudzi pane ranting pamusoro kusiyana kwedu. A keke rine mari zvinhu zvakawanda kusanganisira mazai zvakanaka, munyu, shuga, nezvimwewo. Kana vari sezvaiita pamwechete uye akabika, tawana keke wakanaka kubva kuti. Edza kuisa munyu, shuga, mafuta, uye mazai mumuromo mako usati kugocha uye uchawana puke ushingi dzenyu!
Saka kana mukadzi wako / murume ndiye tsvuku, chena, girini kana chero chinhu chakakodzera hurukuro. Nyaya iripo ndeyokuti kana y'all kuwana kubatana kuti y'all funga uri varambe zvose hwenyu. nguva. Ini chokwadi funga kuti vanhu sarudza pamusoro nemhaka rudzi zvidiki-pfungwa, uye havana kuona munhu wose (mweya, mweya uye muviri).
Biota Macdonald • Chivabvu 14, 2018 pa 10:34 pm • pindura
Rudo kuti iwe akanyora nezvazvo! Ndiri muna vendudzi dzakasiyana pachangu, uye munzira dzakawanda ndakakwanisa kurondedzera aine yakawanda chii pawaivaverengera.
Triola Dulaney-Ndiaye • Nyamavhuvhu 20, 2018 pa 12:54 ndiri • pindura
Vanhu uye mafungiro avo! Imi Vanhu vanoramba vachirarama nokuda Mwari! Une mhuri chakanaka!
RealityCheck • Gunyana 8, 2018 pa 7:41 ndiri • pindura
Wow, ndiri chena uye handikwanisi kunyange kusangana mukadzi dzakatsarukana romuzvarirwo chena nhasi.
Verena • Gunyana 9, 2018 pa 7:00 ndiri • pindura
First oof Ι zvose vanoda sayy Blog guru! uye
aiva mubvunzo quicқ iyo Ndinoda kubvunza kana үou
regai muchibata. Ndakanga curio ᥙ ѕ kuziva hоw iwe dzinyanye yourѕelf uye kuchenesa pfungwa dzako pгior nomunyorero.
I һave aiva rokubvisa nguva yokururamisa thoughfs yangu pakuita ndangariro dzangu.
I zvechokwadi kunakidzwa writіng Zvisinei chete sokunge tһe firet 10 wo 15 maminitsi vari kwatiri ᥙ mutsigiri akarasika juist kuedza Sofia ց urfe outt sei kutanga. Chero pfungwa kana zvahungava hwakaita zvakavimbika?
Taurai: Vakadzi vanovada nokuti Trump And The Black Men – Interracial Marriage
Jill • Kukadzi 10, 2019 pa 7:36 ndiri • pindura
Nguva dzose shandisa chikonzero kupembedza zvaunoita.
Erma • Chivabvu 2, 2019 pa 12:48 pm • pindura
Vanhu vazhinji vanoda mumwe izvo zviri kunyanya kwavari, kana chete
chinhu unconventional kana chinokosha.
kurambana gweta • Chikumi 19, 2019 pa 1:59 ndiri • pindura
Ko iwe tifunge kana ini kutaura zvishomanana mapikicha nguva
I zvinopa chikwereti uye manyuko shure kwenyu nzvimbo?
Blog My ari chaiwo chete nzvimbo mubereko sezvo zvako uye yangu vashanyi
kuti zvechokwadi kubatsirwa vakawanda mashoko iwe mupe pano.
Ndapota itai kuti ndizive kana izvi zvakanaka nemi. Ndatenda!
zvechikadzi • Nyamavhuvhu 2, 2019 pa 3:14 pm • pindura
Ꮃ ow, аrticle iri zvakanaka, hanzvadzi yangu iri kuongorora zvakadaro
zvinhu, Saka ndiri goіng kuzivisa һer.